ဟျောနနျးဒဝေီ – My Blog
ရှမျးပွညျဆောငျးညသညျ အအေးရကျစကျလှနျးနသေညျ။ ‘အခှနျဘဏ်ဍာနျတျောမြားကို ဗိုလျယကျခနှငျ့ တပညျ့မြားက သိမျးပိုကျ လိုကျပါပွီ ခငျဗြား’… ‘ဟငျ…တောကျ…ယကျခခှေးမြိုး’ စပျခှနျကွာ လကျသီးနှဈဖကျဆုပျရငျး…အံကွိတျလိုကျသညျ။ ‘မောငျကြျော’ … ‘ဖရာ့’… စောမွတျသန်တာ … သမီးငယျ နို့စို့နရောသလှနျထကျမှ ဖရိုဖရဲလူးလဲထပွီး… စပျခှနျကွာထံ အပွေးကလေး လာ၏။ ရုတျတရကျထလိုကျ၍ ရှညျလြားသောနနျးတှငျးလုံခညျြက ပိုးသားပြော့ပြော့မို့ လြောပုံဆငျးသှားလရော စောမွတျသန်တာ တငျပါးဝိုငျးဝိုငျးကွီးမြားမှာ ဝငျးကနဲပျေါထှကျသှားပွီးပေါငျတံ ဖွူဖွူကွီးမြားမှာ ခုံထမောကျမို့နသေောေ-ာကျဖုတျကလေးမှာလဲ တနျးကနဲပွူးထှကျလာခဲ့ ရလသေညျ။
ထိုအခါ စိုငျးဝဏ်ဏမကျြလုံးမြားက ဝငျးဝငျးတောကျပသှားပွီး စောမွတျသန်တာ၏ေ-ာကျဖုတျ လေးကို တဝကွီးမွငျလိုကျရာ ရငျထဲပူနှေးသှားပွီး တလှပျလပျှခံစားလိုကျရလသေညျ။ စောမွတျသန်တာမှာလညျး ရှကျလှနျး၍ ထမီ ကို ကောကျယူကာ….သလှနျစီသို့ ပွေးဝငျသှားလသေညျ။ စပျခှနျကွာမှာကြောပေးကာဟျောနနျးအပွငျသို့ အံတကွိတျကွိတျနဲ့ ကွညျ့ရငျး ဒေါသဖွဈနမေိ၍ သတိမထားမိလိုကျရှာပေ။ ‘စိုငျးဝဏ်ဏ…’ ‘မှနျ…မှနျပါ့ဖရား…အမိနျ့ရှိပါအရှငျ’ … ‘ယကျခကိုဖမျးဘို့… လူစု…အခုထှကျမယျ’ … ‘မှနျပါ့ဖရာ့’… စိုငျးဝဏ်ဏ အပွေးထှကျခှာသှားလေ၏။ နှငျးတှကေတဖှဲဖှဲကနြသေညျမို့ အရာခပျသိမျး ဝေ့ ဝဲနကွေ၏။ တိတျတဆိတျ ခြီတကျနသေော ဗိုလျယကျခတို့ စခနျးကို ဝိုငျးထားကွသညျ။ သို့သျော အသံကစိုးတဈမြှ မကွားရ၊ မီး ရောငျလကျလကျကလေးမှမမွငျရ… စပျခှနျကွာနှငျ့ လကျစှဲတျောသူရတို့ စခနျးထဲဝငျ၏။
‘ ဝဏ်ဏ … ဘယျရောကျနလေဲ’ ‘ တပျသားတှကွေားထဲမှာ တှခေဲ့တယျ ဖုရာ့ ..အခကျြပေးတာနဲ့ ဝငျတိုကျဖို့ အသငျ့ ပွငျ နပေါတယျ ..ဖရာ့’ တဲအတှငျးသို့ .. စပျခှနျကွာတို့နှဈယောကျ ခုနျဝငျလိုကျ၏။ ‘ဟငျ… တျောဘုရားကွီး ပါလား ’ ဗိုလျယကျခက ဝတျလဈစလဈ ဖွငျ့ မိနျးခလေးတဈယောကျကို ခွနှေဈခြောငျး မိုးပျေါထောငျပွီး ပယျပယျ နယျနယျ -ုပျနစေဉျ ဖွဈသညျ။ ‘ အောငျမလေး ’ အသကျ (၁၅) နှဈခနျ့သာ ရှိသေးသော မိနျးကလေးမှာ အိပျယာက လူးလဲထပွီး စောငျကွီး ရဈပတျလြှကျ.. စပျခှနျကွာ ရှေ့၌ ဗိုလျယကျခ နှငျ့ အတူလကျထောကျ ခေါငျးငုံ့ကာ … လကျအုပျခြီလိုကျရှာလသေညျ။ ‘ ယကျခ မငျးငါ့ရတနာတှေ … လမျးက ဖွတျလုတယျဆို ’ ‘ မ ဝံကွောငျးပါ … တျောဖရားကွီး ဖရာ့ ’ ‘ ဟဲ့ .. ငါ့တပျမှုး .. ဝဏ်ဏ ..ကို ချေါ စမျးဟေ့ ’ စပျခှနျကွာက .. တဲအပွငျသို့ လှမျးအျောလိုကျ လေ သညျ။
‘မှနျပါ့ .. တပျမှုးဝဏ်ဏ .. လောငျးလုံတောငျကွား မစဈခငျကပငျ .. ပြောကျနကွေောငျး ကြှနျတျောမြိုးလြှောကျ တငျဝံ့ပါသညျ ဖရာ့ ’ ‘ ဟဲ့ .. ငနမြေိုး .. ဒါဖွငျ့ ဒီကောငျ ဝဏ်ဏ.. ဘယျရောကျ သှားလဲဟ.. လိုကျ ကွစမျး ’ ‘ ဒေါကျ… ဒေါကျ.. ’ ‘ မောငျတျောလားဟငျ ’ ‘ အငျး ’ ‘ ဂြောကျ.. ဂြောကျ .. ဂလြောကျ .. လောကျကြီ ’ ‘ ဟငျ.. စိုငျးဝဏ်ဏ ’ ပွငျပနှငျးထုအခြီ.. ဟျောနနျးတံခါးမကွီးအတှငျး အတငျးတိုးဝငျလာကွသညျ။ အဆာငျတျောသားနှဈဦးက စောမွတျသန်တာကို ဓါးလှတျကိုယျစီနှငျ့ ဝိုငျးရံ စောငျ့ရှောကျ နကွေသညျ။
‘ စိုငျးဝဏ်ဏ .. မောငျတျော ဘုရားရောဟဲ့ ’ ‘ မှနျပါ့ .. အတှငျးဆောငျ ၌ တငျလြှောကျ ခှငျ့ မပွုပါ ဖရာ့ ’ ‘ ကဲ… လာလာ .. မငျးတို့ ဒီမှာပဲ နခေဲ့ကွ ’ အစောငျ့နှဈယောကျတို့ ခွံရံနရောမှ ထားရဈခဲ့ပွီး စိုငျးဝဏ်ဏ ကိုချေါကာ .. အတှငျးခနျးထဲသို့ ယုံကွညျစှာ ဝငျခဲ့မိလေ သော စောမွတျသန်တာ၏ မဟာအမှား .. အတှငျးဆောငျ သလှနျထကျရောကျသညျနှငျ့ စိုငျးဝဏ်ဏ၏ သနျမာသော လကျမောငျးကွီးမြား ဖွငျ့ ရဈပတျသိမျး ဖကျခွငျးကို ခံလိုကျရပွီး နှဈဦးသားလုံးထှေးကာ ကွမျးပွငျပျေါသို့ ကသြှား လရော.. စောမွတျသန်တာ ထမီလေး မှာ လြှော့ရဲသှား၏။
‘ အိုး … နငျ ဘယျလို လုပျတာလဲ .. ဝဏ်ဏ ’ ‘ နငျ့ကို .. လိုးခငျြလို့ပါ သန်တာ ’ ‘ ဟယျ.. နငျ မိုကျရိုငျး လှခညျြလား ဝဏ်ဏ ရယျ ’ မှေးထုံ သငျးကွိုငျနသေော သန်တာပါးပွငျလေးကို တအားကွီးနမျးပွဈရငျးက လကျမြားက.. သန်တာ့ နို့အုံလေးမြားကို ဆုပျနယျ၏။ လကျ တဈဖကျကလညျး ပေါငျကွားထဲသို့ နှိုကျပွီး ခပျရှရှလေး ပှတျသပျနရော .. စောမွတျသန်တာ မီးဖှားပွီးစ .. နုဖတျနသေောေ-ာကျ ပတျလေး ကို တငျးတငျးစုစညျး လိမျကဈြထားလိုကျ လသေညျ။ ရုနျးရငျး ကနျရငျး ဖွဈလညျး .. ‘ ငါ .. ခလေး မှေးပွီးတာ မကွာ သေးဘူး ဝဏ်ဏ ရယျ မလုပျပါနဲ့.. ဟယျ .. တောငျးပနျ ပါတယျ.. ’ ဟု တောငျးပနျရှာပါတယျ .. သို့သျော ကာမဘီလူး ဝဏ်ဏကား နသိုး ကွိုးပွတျ .. ကွမျးလပွေီ
‘ ငါ.. ခငျြတာပဲ .. ငါသိတယျ .. သန်တာ .. နငျကောငျးကောငျးမခံရငျ .. ဒီမှာတှေ့ လား.. ဓါး ’ ဓါးသမားမို့ ဓါးအားကိုးဖွငျ့ အနိုငျကငျြ့ လသေညျ။ အေးမွသော ဆောငျးညခမျြးမှာ သန်တာခြှေးသီး ခြှေးပေါကျတှေ စို့လာနသေညျ။ ငှကျကွီးတောငျဓါးက ..လညျမွိုပျေါ သို့ ကနျ့လနျ့ဖွတျ တငျထားပွီး ဖိကပျထားလသေညျ။ စောမွတျသန်တာက ရုနျးကနျအားမြား.. ကဆြငျးသှားပွီး.. ငွိမျသကျသှားရလေ သညျ။ ထိုအခါမှ.. ဝဏ်ဏက ကနြေပျစှာပွုံးရငျး … သန်တာ့ထမီ ကို ဆှဲခြှတျပွဈလိုကျ လသေညျ။ နမေထိ.. လမေဟတျ မိဖရားလကျ ကလေးလို အသားအရညျမြားက နူးအိပြော့ပြောငျးနသေညျ။ မီးဖှားပွီးစ..သှေးသဈ လောငျးစမို့ အလှအားလုံး အသဈ..အသဈမြား ဖွငျ့ ပွညျ့ဖွိုးဖောငျးကားနသေောေ-ာကျဖုတျလေးမှာ.. ခပျယောငျယောငျလေး တငျးနဆေဲ ဖွဈပွီး .. စိလေးမှာ လကျသနျးတဈ ဖြားစာခနျ့ ပွူးထှကျနသေညျကို ဝဏ်ဏက စူးစူးဝါးဝါး စိုကျကွညျ့ရငျး.. သူ့ပေါငျကွားမှ – ကွီးမှာ………. တဒိနျးဒိနျး ထောငျထလာ လသေညျ။
သန်တာ့ မကျြနှာလေး.. နီရဲလကျြ ..ဒေါသစိတျရှကျစိတျတို့ဖွငျ့ ..နှုတျခမျးလေးကို ..ပွတျလုမတတျ ကိုကျထားရငျး မကျြရညျမြား စီးကြ လာလသေညျ။ စငျစဈ .. ဝဏ်ဏဟာ ငယျမှေးခွံပေါကျ မဟုတျခဲ့ အရှငျမှေး၍ နခေ့ငျြးကွီးခဲ့ရသော.. သာမာနျ သိုငျးသမားလေး ဘဝမှ .. ဟျောနမျးသုံး သိုငျးဆရာ အဖွဈသို့ စပျခှနျကွာပို့ပေးခဲ့ခွငျး ဖွဈသညျ။ သန်တာ နှငျ့ ဝဏ်ဏမှာ သကျတူရှယျတူ နှဈဆယျကြျောကြျော လေးမြား သာ ဖွဈကွ၍ သှေးဆူလှယျသူမြား ပီပီ အလိုမတူသညျ.. တူသညျအပထား.. လိငျအင်ျဂါမြား ထိတှလေို့ကျသညျ့ နှငျ့ ပငျ ..နှေးထှေးအိစကျခွငျး အရသာ နှငျ့ေ-ာကျပတျဟူသော အသိတို့ ကွောငျ့ နှဈဦးသား၏ ရငျမြားဗလောငျစူအောငျ မှိုငျးမိနကွေ သညျကို သန်တာ သတိထားမိလသေညျ။
သန်တာ့ ကိုယျခနျဓာ ဖှဲ့စညျးပုံကလညျး တခွားမိနျးကလေး တှထေကျတော့ ထူးခွားနသေညျမှာ အမှနျပငျ..ေ-ာကျဖုတျနှုတျခမျးသား တခွမျးဆီကပငျ အလှနျတရာကွီးမားလှသညျ.. မှေးဖှားပွီးစမို့ .. ယောငျနသေညျလညျး ဖွဈနိုငျသညျ။ ယငျးနှုတျခမျးနှဈခွမျး စေ့ ကပျနသေော အနအေထားက မောကျကွှား တငျးပွညျ့ဖွိုးပွီး…… ဝဏ်ဏ၏ ကွီးထညျ့စဉျတှငျ တငျးကွပျစှာ စုပျယူထားသကဲ့ သို့ ကောငျးမှနျလှသညျ။ သန်တာလေး၏ ဆီးခုံအထကျ.. ဖွူဖှေးဖှေး နူးညံ့နသေော ဆီးခုံလေးကို ဝဏ်ဏက မကျမကျ မောမောလေးဖွငျ့ လြှာနှေးနှေးကွီးနှငျ့ ယကျလိုကျလသေညျ။ သန်တာ့ခါးလေး ကော့ပွီး အငျးကနဲ ဖွဈခါ.. ဇကျကလေး စောငျးကသြှားသညျ အထိ ခံစား လိုကျရလသေညျ။ လကျနှဈဖကျကလညျး မရညျရှယျပဲ.. ဝဏ်ဏဆံပငျမြားကို ဖှဖှလေး ကိုငျမိလိုကျပွီး.. ပေါငျနှဈဖကျကိုလဲ ကွာကွာ စကေ့ပျ မထားနိုငျတော့ပဲ ကားပေးလိုကျမိလသေညျ။
ဝဏ်ဏက ကို အတငျးအကွပျထညျ့ခွငျးကို မအောငျမွငျမှနျးသိ၍ ဓါးကိုကွမျးပွငျ ပျေါသို့ ခလြိုကျပွီး.. ပေါငျအတှငျးသားနှဈဖကျကို ..အတှငျးမှ ကနျဖွဲလိုကျပွီး လကျနှဈဖကျနှငျ့ ထောကျထားလိုကျခါ.. ပွဲအာလာသောေ-ာကျဖုတျလေးထိပျမှ တကယျ့မိနျးပှိုငျ့ေ-ာ ကျစိလေးကို လြှာစောငျးလေးနှငျ့ ထိုးဆှပေးလိုကျသော အခါ၌ကား ..တငျးခံနိုငျသော စှမျးအားမြား သန်တာ့ကိုယျတှငျ ပြောကျလှငျ့ ကုနျတော့သညျ။ ဆီးစပျ.. ပေါငျတှငျးသား.. စအိုမှ တကိုယျလုံးအနှံ့အပွား ..သိမျ့သိမျ့ခါသော ကာမ ..ဆန်ဒမြားကို တဖှားဖှား လှုံ့ဆျောလာလတေော့သညျ။
ဝဏ်ဏကလညျး သန်တာ တဈယောကျ ခွမေလေးမြား ကုတျကှေးပွီး အကွောလေးမြား ထောငျထလာသညျနှငျ့ .. သန်တာ့တဈကိုယျလုံး အဝတျဆို၍ ဘာမှမကနျြအောငျ ဆှဲခြှတျပွဈခါ.. ဝိုငျးစကျကွီးမားသော နို့ကွီးနှဈလုံးကို အိအိ..တုံတုံဖွငျ့ ..လကျဝါးကွီး အုပျကိုငျပွီး ပှတျသပျဆုပျနယျလကျြ ..ေ-ာကျရလေမြေား စိုရှဲစ ပွုလာသောေ-ာကျပတျကလေး ထဲသို့ ကွီးကို တပွေီ့း သှငျးလိုကျ လေ သညျ။ ‘ ဗွဈ….. ဗွဈ….. ဗွဈ ’ ‘ သေ.. သပေါပွီ ဝဏ်ဏ ရယျ.. ဟငျး .. ဟငျး ’ သန်တာပွီးသှားအောငျပဲ .. ဝဏ်ဏကွီးက ကွီးမားထှား ကွိုငျးလှသညျ.. ထိပျအဖြားဝိုငျးကပငျလငျြ သာမာနျအခြိနျ၌ ကပျြစဝေို့ငျးခနျ့ရှိလသေညျ။
ကာမအရှိနျတကျလာသော အခြိနျမြိုး၌ ဝဏ်ဏကွီး လုံးပတျသညျ မွှဟေောကျတဈကောငျ၏ ပွောငျလကျခွငျးမြိုးဖွငျ့ အရောငျတ လကျလကျ တောကျခါ.. လကျတဆုပျ အံကြ လောကျအောငျ ကွီးထှားလှလသေညျ။ ကိုယျထညျကွီးက ..နူးညံ့ဖွူဖှေးသောေ-ာ ကျပတျနှုတျခမျး သားမြားကို ခေါငျး အတှငျးသို့ ပှယျယူစုပွုံပွီး.. ဆှဲယူသှားသလို ခံစားလိုကျရသဖွငျ့ .. သန်တာ့ ခမြာ.. ‘ သပေါပွီ.. ဝဏ်ဏ ရယျ. ’ ဟု ငွီးတှားလိုကျ လသေညျ။ အတနျပတျလညျတှငျ ကွီးမားသော အကွောကွီးမြားကလညျး ဖုထဈ.. ထောငျထလြှ ကျ.. အပွိုငျးပွိုငျးထနပွေနျရာ ..ေ-ာကျဖုတျလေးထဲသို့ လိငျတံကွီး ထထဈခွငျး နဈဝငျသှားတိုငျးေ-ာကျစိလေးထိပျကို တဈ ခကျြပှတျပွီးမှ ဝငျသှားခွငျးဖွဈသညျ။
ထိုအခါ .. သန်တာမှာ ထှနျ့..ထှနျ့..လူးကာ တဈကိုယျလုံး ခါ..ခါသှားပွီး .. ‘ အငျ့ ’ ကနဲ ငွီးတှားလတေော့ သညျ။ ဝဏ်ဏမှာ အားရပါးရ ကွီး ပှဲတျောတညျရတော့ မညျဆိုသောအခါ၌ ဘာကိုမှသတိမထား..ေ-ာကျဖုတျကလေးကိုသာ.. အသာငမျးငမျးကွီးဖွဲကာ.. သူ့ အယျစတုံကွီးကို အတငျးဖွဲထညျ့ပွီး ..သှငျးနတေော့သညျ။ သန်တာမှာ ဝဏ်ဏ မကျြနှာကို မကွညျ့ရဲရှကျလှနျး၍ခေါငျးလေးစောငျးထား မိလသေညျ။ တဈခကျြတဈခကျြမကျြနှာလေးရှုံ့မဲ့ပွီး ‘ ဟို့.. အိုး.. အငျး…… ကြှတျ…. ကြှတျ .. ’ ဟုသာ ငွီးတှားရှာသညျ။ တဈခါတဈရံ ဝဏ်ဏကွီးက နူးအိဆဲရှိသေးသော သားအိမျခေါငျးကို .. ထိုးထောကျမိသောအခါမြိုး မြားတှငျကား .. ဝဏ်ဏ ရငျဘတျကွီး ကို ခပျတငျးတငျးလေး ဆီးထှနျးထားရငျး..
‘ ဖွေးဖွေးလုပျပါ.. ဝဏ်ဏ ရယျ.. နာလှနျးလို့ပါ ’ ဟု သနားစဖှယျလေး တောငျးပနျရှာသညျ။ ဖွူဖှေးသနျ့ရှငျး လှသော သန်တာ ၏ တျောဝငျေ-ာကျဖုတျလေးကို ဝဏ်ဏကဲ့သို့သော ကွီး မဲမဲကွီးက ဒလကွမျးထိုးဆောငျ့ နသေညျမှာ မတရားလှနျးရာကသြညျ ။ ခြော့ မွူ နူးဆှပွီး တော့ သန်တာ့ အဘို့ ခံနိုငျရယျပိုလာနိုငျ စသေညျ မဟုတျပါလား .. ‘ ဗွဈ .. ဗွဈ….. ဗွဈ…. ဒုတျ ’ ‘ အား………. အမလေေး….. လေး ….. ကြှတျ…. ကြှတျ .. ’ ဝဏ်ဏ၏ ဆောငျ့ခကျြမြားက ပွငျးသညျ သန်တာ့တငျပါး ကွီးမြား ဟျောနနျးကွမျးပွငျ ၌ တုနျခါ လှုပျရှားနသေညျ။ ဒူးနှဈခြောငျးလဲ မိုးပျေါထောငျခါ .. သှကျသှကျ လကျလကျကွီးကို လှုပျရှားနတေော့ရာ .. ဝဏ်ဏနှငျ့ သန်တာတို့ နှဈဦး၏ ပေါငျအတှငျးပိုငျး၌ ခြှေးစေးလေးမြားပငျ ပွနျလာလတေော့သညျ။
ရုတျတရကျ မပွီး သန်တာ့နှုတျခမျးနီရဲရဲလေးကို ငုံ့၍စုပျရနျကွိုးပမျးလိုကျသောအခါ .. သန်တာက .. ‘ နှုတျခမျးတော့ မစုပျပါနဲ့ ’ ဟု လသေံလေးနှငျ့ ပွောရငျးကပငျ ..အတငျးခေါငျးကိုလှဲကာ ရှောငျတိမျး ဖယျပွဈသညျ။ မလုပျနဲ့ ဆိုတာကိုမှ လူဆိုတာက လုပျခငျြကွ သညျ။ ‘ ဟငျ့ .. အငျး.. အငျး .. နှုတျခမျး မစုပျ .. ပါနဲ့ ….. ဆို ’ ဝဏ်ဏက အတငျးအဓမ်မ လကျနှဈဖကျကိုခြုပျကိုငျကာ နှုတျခမျးလေး ကို စုပျယူပွီး .. သန်တာ့ပါးစပျ တှငျးသို့ သူ့ လြှာကွီးကို .. ထိုးသှငျးလိုကျလသေညျ။ ‘ အငျး … ဟငျး … ဟငျး … ’ သန်တာ့ မကျြတောငျ ကွီးမြား ကှေးမှေးဆငျးသှား ကွလသေညျ။
ပွီး.. ဝဏ်ဏ လညျဂုတျကွီးကိုလဲ ယောငျယောငျ အမှားမှား ဖကျတှယျ လိုကျမိလေ တော့သညျ။ ခါးလေးကိုလဲ တငျးကနဲ ပွနျလညျကော့ပေးလိုကျမိခါ .. ဝငျလကျြရှိသော ကွီးမှာ ‘ အိ ’ ကနဲ ပိုမို နဈဝငျ သှားပွီး ကပျ ထားလြှကျ သိမျ့ကနဲ သိမျ့ကနဲ .. ဝဏ်ဏက ဖငျကွီးကို အသာလေး မွှောကျပွီး ဖိပေးလိုကျလရော သန်တာ၏ ခွနှေဈခြောငျးသညျ ဝဏ်ဏ ခါးကို ကပျကြေးကဲ့သို့ နှဈဖကျညှပျထားလိုကျလသေညျ။ ‘ အငျ့ .. အငျ့ … အငျ့ ….. အငျ့ …. ဟီး .. ဟီး .. ကြှတျ ’
‘ ပွှတျ .. ပွှတျ .. ပွှတျ .. ဗရီ .. ဗွှတျ ဗွှတျ .. ဗရိ ’ေ-ာကျမှေး နှငျ့ မှေးတို့က ရတေရှဲရှဲဖွငျ့ ဖိကွပျသံလေး နှငျ့ အဝငျအထှကျ .. အပွဲ အစိအသံမြား တိုငျပငျကိုကျ .. နာရီ မှနျမှနျလေး ထှကျပျေါနပွေီး .. နှဈယောကျသား တအားလိမျကဈြ .. တအားတှနျ့ပွီး .. ကဈြကဈြပါအောငျ ဖကျခါ ဟောနနျးကွမျးပွငျ ၌လိမျ့နကွေတော့သညျ။ ‘ ဆရာ ဝဏ်ဏ ’ တပညျ့ကြျော စောပွညျ့ အခနျးတှငျးသို့ ဝငျခလြာသညျ။ အရေးတကွီး အျောပွောလိုကျလသေညျ။ ဝဏ်ဏကိုယျခနျဓာကွီး တှနျ့သှားကာ .. သန်တာ့ ကိုယျပျေါမှ ခှာလိုကျ လေ သညျ။‘ ဗွှတျ ’ ခနဲ – ကွီးက လြောထှကျလာပွီး တနျးတနျးကွီး ခါရမျးနသေညျကို စောပွညျ့တှလေို့ကျ ရသညျ။ ကွောကျစရာ .. အဓိပတိကွီးပါတကားဟု စောပွညျ့စိတျထဲ၌ တိတျတခိုးလေး ရရှေတျမိသညျ။
အလားတူသန်တာ၏ေ-ာကျဖုတျ လေးမှာလညျး အရှိနျတကျနစေဉျကွီးက ရုတျတရကျ ထှကျသှား၍ ကွပျကွပျတငျးတငျးကွီး ခံစားနရောမှ ကားကနဲ ဖွဈသှားပွီး အဝလေးမှာ ကပျြ စဝေို့ငျးခနျ့ ဟောငျးလောငျးလေး ဖွဈနပွေီးေ-ာကျခေါငျးထဲ သို့ပငျ ထနျးကနဲ မွငျရလောကျအောငျ .. ဟငျးလငျးပှငျ့ သှားရှာသညျ။ ပွီးမှ … တခကျြရှုံ့ကနဲဖွဈပွီး ပွနျပိတျသှားသညျ။ သန်တာေ-ာကျပတျအောကျ အကှဲကွောငျး လေးတှငျ ဝဏ်ဏ၏ သုတျရညျအခဲလိုကျ .. အခဲလိုကျ ပုံကနြသေညျထို့ အပွငျေ-ာကျခေါငျး ထဲမှ .. ဖရု.. ကနဲ စိမျ့ကယြိုစီးကနြေ သညျကို စောပွညျ့ အစအဆုံး တှလေို့ကျရလသေညျ။
‘ ငါ .. သန်တာ့ကို လကျလှတျမခံနိုငျဘူး .. စောပွညျ့ ’ ‘ မှနျပါ့ .. ဖရာ့ ’ ‘ မငျးစောငျ့နေ .. ငါ ထှကျတိုကျ မယျ ’ ဝဏ်ဏ ပွောပွောဆိုဆို နှငျ့ ဓါးကောကျယူသညျ။ ‘ ဝဏ်ဏ ….. ဝဏ်ဏ ..’ သန်တာက လူးလဲထပွီး ချေါသညျ။ ဝဏ်ဏက ဆတျကနဲ လှညျ့ကွညျ့သညျ။ ခေါငျးလေးကို ခါရမျး ပွနလေသေညျ။ ဝဏ်ဏ .. သန်တာ့ အနားသို့ ပွနျလြောကျသှားပွီး .. သန်တာ့ပါးမို့မို့လေးကို ဖိနှဈပွီး နမျးလိုကျခါ ‘ သန်တာ့ကို … လကျမလှတျနိုငျတော့ဘူးကှယျ ’ ‘ အကုနျ ဒုကျခ ရောကျကုနျလိမျ့မယျ .. ဝဏ်ဏ .. ရယျ ’ ‘ စိတျခပြါ.. သန်တာ ကိုယျသန်တာ့ဆီကို .. ပွနျလာမှာပါ .. ’
ပုဆိုးကို တငျးနအေောငျ ခါးတောငျးကွိုကျပွီး သိုငျးအကြျောအမျော .. ဝဏ်ဏတဈယောကျ.. လှားခနဲ ခုနျထှကျ သှားလတေော့သညျ ။ သန်တာ .. သိပျမရငျးနှီးလှသော စောပွညျ့ ကို တဈခကျြမြှ ကွညျ့ပွီး အဝတျမြားကို ကောကျဝတျခါ နို့စို့ခလေး အိပျနသေော သလှနျဆီ သို့ လြောကျသှားလသေညျ။ စောပွညျ့က လသောပွတငျးမှ အပွငျသို့ အခွအေနကေိုလလေ့ာနရေငျး သန်တာ့ကို အမှတျမဲ့ လှမျး ကွညျ့မိသညျ။ ခလေးကို သလှနျပျေါ၌ ငုံ့ကွညျ့ရငျး ကုနျးထားသော တငျပါးကွီးမြားမှာ သရယေိုခငျြစရာကွီး လှပဝိုငျးစကျပွီး ခငျြ စရာ အိအိထှားထှားကွီးတငျးနသေညျ။ စောပွညျ့.. သန်တာ့အနားသို့..ရောကျသှားပွီး သန်တာ့ တငျပါးကွီးကို.. ခပျဖှဖှလေး ပှတျလိုကျ သညျ။
‘ ဟငျ …. ရှငျ ……. ရှငျ ’ သန်တာ ဆကျကနဲ လှညျ့အျောသျောလညျး သနျမာသော စောပွညျ့က ကြှမျးကငျြစှာ ဂုတျကို စီးခြုပျလိုကျပွီး ကုနျးလကျြသားအနအေထားမှ .. ထမီကို ဆှဲခြှတျလိုကျ ပွီး မကွာခငျလေး ကမှ အခံခဲ့ရသောေ-ာကျပတျကလေးက ဖငျနှဈဖကျ ကွားမှ တငျးတငျးစစေ့လေ့ေး ပွူးပွီး ကုနျးထှကျနသေညျကို ခွောကျခွားစဖှယျ တှသေိ့ရပါလသေညျ။ စောပွညျ့ ရငျထဲ .. ကာမ အပူရှိနျမြား .. ဝုနျးကနဲ ထလာသညျ ။ စောပွညျ့သညျ ဝဏ်ဏ၏ တပညျ့တဈဦးဖွဈသလို ကာယဗလမှာလဲ .. အာဌာဝက ဘီးလူးကွီး အလား ကွီးမား ထှားကွိုငျးကာ မဲနကျသော အသားမြားက .. ဆီလူးထားသလိုပငျ ပွောငျတငျးနသေညျ။ လကျဖြံနှငျ့ ရငျဘတျတို့ ၌ အမှေးကွမျးကွီးမြား ထူပိနျးစှာ ပေါကျနပွေီး .. နှုတျခမျးမှေး ထူထူကွီးနှဈဖကျကလညျး မဲမှောငျသနျစှမျးလှပသေညျ။
‘ ငွိမျငွိမျနပေါ.. သခငျမလေး.. ကြုပျအလို မလိုကျရငျ ခုအခြိနျမှာ.. သခငျမလေး .. သသှေားမှာပါ.. ဟဲဟဲ ’ သန်တာ မိမိကံကွမ်မာကို ညိုးငယျဝမျးနညျးစှာ ငိုခလြိုကျရုံမှ တပါး ဘာမှ မတတျနိုငျတော့ .. ထိုအခိုကျ ခလေးက ဝါးကနဲ ငိုခလြိုကျရာ ကုနျးလကျြသား နို့တိုကျပေးနလေရော .. စောပွညျ့ အဖို့ ဆန်ဒပွညျ့ဝစှာ .. ဆောငျ့နိုငျတော့သညျ။ ‘ ခလေး.. နိ့တိုကျနတေယျဟာ .. ဖွေးဖွေးလုပျပါ ’ သန်တာက စတေနာမပါစှာ အငျေါထူးထူးနှငျ့ပငျ ပွောလိုကျမိလသေညျ။ စောပွညျ့ကတော့ သန်တာ့ခါးလေးကို စုံကိုငျပွီး ..မဲမဲကွီးကို အတငျးထဲ့နလေတေော့သညျ။ တကယျတော့ စောပွညျ့ဆိုသညျ့ ကောငျကလညျး ပှဲလနျ့တုနျး ဖြာခငျးလိုကျခွငျးသာဖွဈပွီး နမေ ထိ.. လမေထိ.. လိုးလိုကျခွငျးသာ ဖွဈပသေညျ။
သစ်စာဟူသော အသိဉာဏျ ပညာ တို့ သညျ စောပွညျ့ကိုယျခနျဓာမှ ဖယျခှာသှားကွပွီးဖွဈသညျ။ အပွဈတငျစော၍ တလောကလုံး က မုနျးကွစဦေးတော့ စောပွညျ့ကတော့ မမူပွီ .. အဘယျ့ကွောငျ့ဆိုသျော ဝါဂှမျးထကျပငျနူးညံ့အိနသေော စောမွတျသန်တာကဲ့သို့ေ-ာကျဖုတျမြိုးကို ဘယျအရာမှအရသာ မမှီနိုငျ။ စကေ့ပျနသေောေ-ာကျဖုတျနှုတျခမျးသားလေးမြားက ခပျတငျးတငျးလေး လိငျ တံကို ညှဈထားလိုကျသညျ။ေ-ာကျခေါငျးထဲသို့ ဒဈကွီးဝငျပွီး .. ရပျနားခြိနျ၌ အတှငျးပိုငျး ခေါငျးလှုပျရှားမှု လေးမှာ သိသိသာသာ ကွီး ထိပျကို ပွုစုပှတျသပျပေး တတျကွသညျ။ အပွငျဘမျးလှုပျ ရှားထိတှမှေု့က အခွားေ-ာကျဖုတျမြားထကျ အဆတရာတောငျ မက သာလှနျသော အခကျြပငျ ဖွဈသညျဟု စောပွညျ့မှတျခကျြ ခလြိုကျလသေညျ။
ယခုလညျး .. ကွညျ့ .. အုံလိုကျ ထှေးလိုကျ ထကွှတကျနသေော သှေးတို့နှငျ့ ရောပွှနျးပွီး နှုတျခမျးသားလေး မြားမှာ ပွောငျတငျး နကွေ ခွငျးဖွဈကာ ကာမဆန်ဒကို နှိုးဆှကွသညျ။ေ-ာကျမှေး .. လေးမြားက.. ထူလဗွဈကွီးမဟုတျပဲ နူးနူးညံ့ညံ့ပါးပါးလှာလှာ လေးမို့ေ-ာကျဖုတျအလှက ပိုမို -ခငျြစရာ ဖွဈနရေသညျ။ စောပွညျ့၏ ပွောငျးတငျးမာတောငျနသေော ကွီး တဖွေးဖွေးခငျြး ဝငျ သှားသညျ။
‘ ဗွဈ ….. ဗွဈ….. ဗွဈ .’ ‘ အို့ .. . အငျး .. . ကြှတျ . . . ကြှတျ .. . အငျ့ .. . ဟငျ့ ’ သန်တာ့ခမြာ အံကွိတျမကျြစိမှိတျပွီး .. ခလေးကို နို့တိုကျနသေညျမို့ အားတငျးခံလိုကျရရှာလသေညျ။ သညျအထဲ .. ပေါငျရငျးနှဈဖကျ စလုံးက ပွညျ့ကွပျကွီးမားသော ကွီးကေ-ာ ကျဖုတျထဲ ဝငျလိုကျ သညျနှငျ့ အလှနျတရာ နာကငျြသောဝဒေနာကိုပါ ခံစားလိုကျရသောကွောငျ့ ပေါငျနှဈဖကျကို ထပျမံကား ပေးလိုကျရပွနျပါသညျ။ စောပွညျ့ကမူ .. သေးကဉျြသော ခါးလေးကို လကျနှဈဖကျဖွငျ့ စုံကိုငျဆှဲယူပွီး .. ဖွေးဖွေးခငျြး စောငျ့သှငျး နရေငျး နှငျ့ေ-ာကျဖုတျအဝငျအထှကျကို မမှိတျမသုနျကွညျ့ကာ အရသာ ခံစားနလေိုကျလသေညျ။
‘ စောပွညျ့ရယျ .. မွနျမွနျလုပျပါ .. ညောငျးလို့ပါ ’ အျော .. တခြိနျက .. ဟျောနနျးကွီး၏ မိဖုရား .. တျောဘုရားကွီးပွီးလြှငျ .. အာဏာအရှိ ဆုံး မိနျးကလေး .. အခုတော့ .. တဈခြောငျးေ-ာကျဖုတျထဲ သို့ ကနျ့လနျ့နသေလို မလူးသာ မလှုပျသာ .. ဒါပါပဲ .. မာနကွီးလှခြီရဲ့ ဆိုကာ မရှခြေောတှေေ-ာကျဖုတျထဲသို့ ဝငျသှားတဲ့ အခြိနျမှာ မာန.. တှအေားတှေ .. ပြောကျကှယျကွရတာ ဓမ်မတာပါ .. ‘ ဟငျး .. .. ဟငျး .. ဒါတောငျ တခြို့မိနျးကလေးတှကေ လူအကွောငျး စာဖှဲ့ပွီး .. ခငျြး တူတာတောငျ မှ ဆရာဝနျ .. သင်ျဘောသား ခှဲခွားနကွေလတေယျ.. ’ အခု စောပွညျ့ကွီးက ဘာမှ မဟုတျတဲ့ကောငျပါပဲ .. ဘာဖွဈလဲ ..ဟငျး ဟငျး ..မိဖုရား လညျး – နဲ့ တှတေ့ော့ ‘ ကြှတျ ’ တာပဲ မို့လား။ စောပွညျ့ အတှေးလေးနှငျ့ တစိမျ့စိမျ့ အရသာခံရငျး နစေဉျ ဝဏ်ဏသှေးရူးသှေးတနျး နှငျ့ ပွေးဝငျလာသညျ။
‘ ဟိတျကောငျ .. စောပွညျ့ .. .. သစ်စာဖောကျ ’ ပါးစပျကလဲ အျော .. လကျကလဲ ဓါးနှငျ့ဝငျပိုငျးရာ သှေးနုသားနု .. သန်တာမှာလဲ ကွောကျလနျ့ တကွား ရုနျးကနျထှကျပွေး.. အခွအေနတှေကေ ဝရုနျးသုနျးကား ဖွဈကုနျပွီး ရှုပျထှေးနခြေိနျ ………….. စပျခှနျကွာ နှငျ့ အိပျဆောငျတျော သားမြားအတှငျး ဆောငျသို့ ဓါးလှတျကိုယျစီ နှငျ့ ဝဏ်ဏနောကျ သို့ ဒလကွမျး လိုကျ လာကွသညျ။ ကာမနှံ၌ နဈနသေော စောပွညျ့ အခုနလေး တငျ ကမှ စိတျကူးတှေ အယဉျကွီး ယဉျခဲ့သော စောပွညျ့ .. တနျးလနျးနှငျ့ ကွမျးပွငျ၌ သဆေုံး သှားရပွီ ။ သှေးစှနျးသော ဓါးကို ကဈြကဈြပါအောငျ ကိုငျထားသော ဝဏ်ဏက သန်တာ့ နောကျသို့ ပွေးလိုကျ ပွနျသညျ။
‘ နငျ့ကို အရှငျမထားခဲ့ဘူး.. မိသန်တာ .. သပေတေော့ ’ ‘ ဝဏ်ဏ .. . ဝဏ်ဏ ’ စပျခှနျကွာ ငယျသံပါအောငျ ချေါ၏ ။ ‘ အား ’ စူးရှ နကျရှိုငျးသော သန်တာ့ အျောသံလေးသညျ ဟျောနနျးကွီးတဈခုလုံး ကို အစိပျစိပျ အမှာမှာ ဖွိုခှဲလိုကျသော ဗုံဆံတဈလုံး ထိမှနျ ပေါကျကှဲ လိုကျသညျနှယျ စပျခှနျကွာနား၌ အူထှကျသှားရသညျ။ သန်တာ ….. သှေးအလူးလူးဖွငျ့ …လဲကသြဆေုံးသှားသညျ။ ဝဏ်ဏ ထှကျပွေးရငျ အားယူလိုကျစဉျ စပျခှနျကွာက ဌကျကွီးတောငျ ဓါးကို လှံသဖှယျပွောငျးကိုငျ လိုကျပွီး ပဈလှတျလိုကျ လသေညျ။
‘ အား …’ ဝဏ်ဏ .. လသာ ပွူတငျးမှ ဇောကျထိုး မိုးမြှျောကသြှားလေ တော့သညျ။ အသကျမဲ့နသေညျ့တိုငျ အလှ မပကျြရှာသော ဘဝပကျြမလေး သန်တာ့အလောငျးကို စပျခှနျကွာပိုကျထားရငျး .. သမီးငယျနီတာရဲလေး အျောသံက နားသို့ ဝငျရောကျလာမှ သတိထားမိရှာ၏။ ဤသညျမှာ … ကြျောကြျော သိသော .. စပျခှနျကွာတို့ သားအဖ၏ ဘဝဖွဈစဉျ .. အတိတျမဲ ကွီးဟု ဆိုနိုငျသညျ။ အဘယျ့ကွောငျ့မှနျးမသိ.. လူကွီးမြားပွောနကွေစဉျ.. ကြျောကြျောသညျ စောမွသူဇာကို အလှနျဂရုနာသကျမိ စှဲလနျးခဲ့ရ လေ သညျ။ စောမွသူဇာကလညျး ကြျောကြေျာ့အားငယျသူငယျခငျြးအနဖွေငျ့ လိုကျလြောစှာ အရေးတယူ ဆကျဆံရှာပသေညျ။
အျော.. .. ခဈြရတဲ့ …. သူဇာရယျ …. အခုလဲ .. ဒီ .. မွသဲစံအိမျကွီးစီ .. သှားခငျြပွနျ သတဲ့ .. ‘ ကိုကို ’ ‘ ပွောလေ .. ခလေး ’ ‘ ဒီ လို.. တိတျတိတျပုနျး .. ခဈြမနခေငျြတော့ဘူး ကိုကိုရာ’ ခှနျပိုငျ၏ရငျခှငျကွီးပျေါတှငျ မှောကျအိပျလိုကျရှာလသေညျ။ ခှနျပိုငျက.. ထှေးထှေးအိအိ.. ကိုယျလုံးလေးကို .. အသာအယာ လေးပှတျသပျခြော့မွူရငျးက .. ပှလေို့ကျသညျ။ ဝဈလဈစလဈကလေး လှခငျြတိုငျး လှနသေော နနျးအိဝါကိုယျလုံးလေးက ခှနျပိုငျ၏မို့မောကျထှားကွိုငျးသော ရငျခှငျကွီးထဲ၌ နဈဝငျပွားကပျသှားသညျ။
‘ ကွညျ့ပါလား .. အရမျးညှဈထားတာ အသကျရှူလို့ မဝတော့ဘူး .. ဟှနျး .. သူဒါပဲ .. ဟငျး ’ နနျးအိဝါ .. ပွုံးနှဲ့နှဲ့ပွောရငျး ခှနျပိုငျ့ ပေါငျကွားမှ ခပျပြော့ပြော့ခှခှေကွေီး ဖွဈနသေော လိငျတံကွီးကို ကိုငျကာ ‘ ဒါပဲ ’ ဟု လှုပျရမျးရငျး ပွောကာ .. တခဈခဈရယျနေ လိုကျသညျ။ ခှနျပိုငျက .. ပုခုံးလေး နှဈဖကျကို အသာဆှဲမပွီး နနျးအိဝါ .. ခေါငျးလေးအား သူ့ပေါငျကွားသို့ ဖိခလြိုကျလသေညျ။ ‘ ဟငျ့အငျး.. ကိုကိုရာ .. ဟငျ့အငျး ကှာ ’ နနျးအိဝါ .. မကျြနှာလေး လှဲလိုကျသောကွောငျ့ ပူနှေးသောဒဈကွီးက နနျးအိဝါ.. ပါးမို့မို့ လေးကို ထောကျမိလကျြသား ဖွဈသှားသညျ။
‘ ကိုကို.. ကို့ ခဈြတယျဆို .. ခလေးရဲ့ ’ ‘ အာ.. ခဈြတာ .. ခဈြတာပဲ .. ကွီးတော့ မစုတျခငျြပါဘူး..’ ‘ ကိုကိုကလဲ .. ခလေးေ-ာကျ ဖုတျကလေးကို ယကျပေးမယျလေ.. ’ ‘ ဟငျ့အငျး .. ဟငျ့အငျး .. တျောပီ .. ညဈပတျ.. မလုပျနဲ့ကှာ.. ’ နနျးအိဝါ ခေါငျးမာနသေဖွငျ့ ခှနျပိုငျက .. နနျးအိဝါ အားကုတငျပျေါ သို့ အသာပကျလကျ လှနျခလြိုကျပွီး ပေါငျလေးနှဈခြောငျးကို စုံကိုငျဖွဲကာ ..ေ-ာကျဖုတျဖွူ ဖွူလေးကို လြှာနှေးကွီး ဖွငျ့ ‘ ဗလပျ ’ ကနဲယကျလိုကျလသေညျ။
‘ ဟေ့.. .. ကိုကိုကလဲ . . . လုပျပွီ .. . အား .. ယား တယျ .. ဆိုမှ .. ’ နနျးအိဝါ ဖငျလေး လိမျကဈြ လိမျကဈြ လုပျခါ ရုနျးကနျနရှော သျောလညျး ခှနျပိုငျက .. သူ့လြာကွီး ဖွငျ့ အစှမျးကုနျ ယကျနလေရော .. နနျးအိဝါလေး မကျြနှာမှာ ရှကျစိတျ.. ယားယံ စိတျဖွငျ့ နီနီရဲ နပွေီး .. မကျြရညျမြားထှကျအောငျ .. တခဈခဈ ရယျနလေိုကျ လသေညျ။ ဖငျလေးမှာလဲ ဆတျကနဲ့ .. အောကျသို့ တှနျ့ဝငျလိုကျ အပျေါသို့ ရုတျတရကျ ခုနျးထလိုကျဖွငျ့ .. ဆတျဆတျခါနေ လတေော့သညျ။
‘ ပွှတျ .. ပလပျ .. အငျး .. အငျး ပွှတျ.. ဗွဈ.. ’ နနျးအိဝါ၏ ပွူးထှကျနသေောေ-ာကျစိလေးကို အသာလေး လကျညှိုးလကျမ ဖွငျ့ ညှပျဆှဲပွီး လြာထိပျဖွငျ့ ကလိလိုကျသောအခါ.. .. ‘ အမယျလေး ..ကိုကိုရာ ..ဟငျးဟငျး ..ဘယျလိုကွီးမှနျးလဲ မသိပါဘူး ..တျော ပါတော့ .. အဟငျ့ ..ဟငျ့ ..’ ‘ ပွှတျ.. ပွှတျ ….. ဗွဈ .. ဗွဈ .. ပွှတျ.. ’ ‘ ကိုကို .. ကွညျ့ပါလား .. စိတျညဈ လိုကျတာကှာ .. ’ နနျးအိ ဝါ.. ဆံပငျလေးမြား ပွနျ့ကြဲပွကေနြကွေသညျ။ နို့နှဈလုံးက တုတျတုတျခဲခဲကွီး ခါရမျးနသေညျ။ အစှမျးကုနျဆှဲပွီးဖွဲထားသောေ-ာကျဖုတျကလေး အတှငျးသားမြားကိုပငျ အတိုငျးသား မွငျနကွေရလသေညျ။
‘ ယား .. .. ယားတယျ .. .. ဟိဟိ .. .. … အာဟာ ဟာ .. ယားတယျ .. ကိုကို’ တတှတျတှတျတပွဈတောကျတောကျ ပွောရငျးလူးလှနျ့ လှုပျရှားနသေော နနျးအိဝါအသံလေးက .. မွသဲစံအိမျ အပျေါထပျ ညာဘကျအစှနျးဆုံး အခနျးထဲတှငျ .. တိတျဆိတျမှု့ ကို တိုးညှငျး စှာ ပြံ့လှငျ့ နလေတေော့သညျ။ ဖဖေကေ .. နနျးအိဝါ ကို တဈဦးတညျးသော သမီးမို့ အသကျမက ခဈြပွီး အလိုလိုကျခဲ့သညျ။ မွသဲ စံအိမျ မှာ ဖဖေေ ဦးစိုငျးလုံ၏ သခငျ .. ဘဘစပျခှနျကွာ၏ ဟျောနနျး အဟောငျးကွီး ဖွဈသျောလညျး နနျးအိဝါတို့ သားအဖက မပွတျသုတျသငျ ရှငျးလငျး ထား၍ သနျ့ရှငျးနခေဲ့သညျ။
စောခှနျပိုငျက လှတေဈစငျးနှငျ့ ငါးမြှားလာရငျး ဒီအိမျကွီးသို့ ရောကျခဲ့ပွီး .. နနျးအိဝါ နှငျ့ ခဈြသူ ဖွဈခဲ့ကွ၏။ အခဈြ .. ဆိုသညျကို .. အရသာ မှ မမွညျးစမျးတတျသေးမှီ အရသာ ကိုနနျးအိဝါ .. စှဲလနျး တကျမကျခဲ့ရသညျ။ ကိုကို မလာလြှငျ .. မိမိေ-ာကျဖုတျ ကလေးက ပိုခံခငျြ နသေညျ။ ကိုကိုလာပွနျတော့လဲ ခံလို့ကို မဝနိုငျအောငျ ဖွဈခဲ့ပွီး .. မိမိကပငျ .. အမြိုးမြိုး .. တကျခဲ့မိသညျ အထိ ကိုကို့ အပျေါ၌ အခဈြပိုခဲ့ရသညျ.. နနျးအိဝါ .. ရယျပါ။ အမှနျတဈကယျလညျး .. စောခှနျပိုငျ သညျ မကမျြး ကသြေူဖွဈသညျ။ နနျးအိဝါ၏ လုံးဝနျး ကဈြလဈြသော နို့ကွီးမြားကို ခပျရှရှလေး ပှတျပေးရငျး လကျညှိုးလကျမလေးဖွငျ့ နို့သီးခေါငျး လေးကို ..ညှပျ ယူဆှဲပှတျလိုကျ ခွငျးမြားက ခံခငျြ စိတျကို ထိပျရောကျစလေသေညျ။
တဖနျ နှုတျခမျးလေးမြားကို ငုံခဲ ထားရငျး ..လြာဖွငျ့ကလိပေးသော နှုတျခမျးစုပျခွငျး အတတျပညာကိုလညျး စောခှနျပိုငျက ကြှမျးကငျြလှနျး လရော .. သုတျရမြေားပငျ ထိမျးမထားနိုငျတော့ပဲ ပနျးထုတျမိသညျ အထိခံ၍ ကောငျးလှနျး ပါသညျ။ မညျသို့ပငျ ဖွဈစေ .. မွသဲစံအိမျ၌ စောခှနျပိုငျ နှငျ့ နနျးအိဝါတို့ တိတျတဆိတျ ပှဲ လေးမြား ကငျြ့ပခဲ့ကွသညျ။ နနျးအိဝါကလညျး ဖခငျဦးစိုငျးလုံ မသိအောငျ .. စောခှနျပိုငျထံ အမွဲလိုလို အခံလာနကွေပငျ ဖွဈသညျ။ ဤဒဈကွီးဖွငျ့ နနျးအိဝါသားအိမျလေးကို ဆောငျ့လိုကျ လတေိုငျး နနျးအိဝါမှာ.. ကော့..ကော့ပွီး .. တှနျ့သှားလောကျအောငျ ကောငျးလှနျးလှပါသညျ။ အဝတျမဲ့ ခှနျပိုငျကြောပွငျကွီးကို တ ရှရှပှတျသပျရငျး ဖွငျ့ နနျးအိဝါ မှေးပွီးခံနရေသညျ။
အရသာမှာ အလှနျတရာ ရာနှုံးပွညျ့ ကောငျးသောန ညျး ..တဈရပျ ဖွဈသညျ။ ယခုလညျး နနျးအိဝါေ-ာကျခေါငျးထဲသို့ ထထိမိမိ ကွီး လြာစောငျးထိုးသှငျးပွီး ..ယကျပေးနသေော ခေါငျးကို နနျးအိဝါ လကျအစုံဖွငျ့ ထိမျးကိုငျရငျး ပေါငျနှဈလုံးကို အစှမျးကုနျဖွဲ ပေး ထားရငျး ခွနှေဈခြောငျးမှာ လထေဲ၌ တှယျရာမဲ့လှုပျရမျးနမေိရှာလသေညျ။ ‘ ခလေး .. ရယျ ’ ‘ ဘာလဲ .. ကိုကိုရယျ .. အရမျးဆိုး တာပဲ.. . မောလိုကျတာ .. ’ ‘ ကိုကို့ .. ကို စုပျပေးပါလားဟငျ ..’ ‘ ဟငျ့အငျး .. နနျးအိ .. ရှကျတယျ .. ’ ‘ နနျးအိကလဲကှာ.. ခုထိ ရှကျနတေုံးလား ..’ ‘ ရှကျတာပေါ့လို့ .. စုပျ ရမှာကိုး .. ’
ခှနျပိုငျက နနျးအိဝါ ကိုယျလုံးလေးကို ယုယုယယလေး သိမျးဖကျရငျး .. နရောအနှံ့နမျးလိုကျ ရငျးမှ နနျးအိဝါ ပါးစပျနားသို့ သူ့ကွီးကို တပေ့ေးလိုကျလသေညျ။ နနျးအိဝါက .. ‘ ဟငျ့ ’ ကနဲ့ မကျြစောငျးလေး ထိုးပွီး မရဲတရဲလေးဖွငျ့ ဒဈကွီးကိုငုံခဲပွီး လြာလေးဖွငျ့ ကလိပေးနလေပွေီ .. မကွာခဏ -ကွီး တဈခြောငျး လုံးက လညျမွို ရောကျ သညျ အထိ စုပျသှငျးလိုကျ မှုတျလိုကျဖွငျ့ ..စုပျခွငျး သင်ျခနျးစာ ကို လကျတှကေ့ကြ လုပျနလေတေော့သညျ။
ခှနျပိုငျကလညျး အရသာရှိရှိဖွငျ့ နနျးအိဝါ ခေါငျးလေးကို ထိနျးကိုငျပွီး အားရပါးရ ဆောငျ့လိုကျသောအခါ ထိပျကွီးက အဆုံးဝငျ သှားသဖွငျ့ နနျးအိဝါခမြာ .. မကျြလုံးလေးမြား ပငျပွူးသှားပွီး ကမနျးကတနျး ကွီးကို ဆှဲခြှတျလိုကျသညျ။ ‘ ကိုကိုကလဲ .. .. . အရမျးပဲ .. .. . ဘာမှနျးလဲ မသိဘူး .. ’ ‘ တျောပီကှာ.. မစုပျပေးတော့ ဘူး . . ’ နနျးအိဝါ စိတျကောကျဟနျလေးဖွငျ့ မကျြနှာလှဲပွီး တဖကျသို့လှညျ့သှားလသေညျ။ ခှနျပိုငျက အသာအယာ ဆှဲယူ ပှဖေ့ကျပွီး ဖငျလေးကို မိုးပျေါထောငျယူပွီး ပွူးထှကျနသေောေ-ာ ကျ ဖုတျလေးထဲသို့ ကွီးမားပွီး ပွောငျလကျနသေော ကွီးအား အသာတကေ့ာ ထောငျပွီး ဖိခသြှငျးလိုကျလသေညျ။
‘ အီး .. ဟီး .. ဟီး .. နာတယျ .. ကိုကိုရဲ့ .. အငျ့ အငျ့ .. ’ ‘ ဖငျပိုပွီး မွှောကျထားလေ .. ’ နနျးအိဝါက .. သပျလြှိုလိုကျသလို ဝငျလာ သော -ကွီးအားေ-ာကျဖုတျနှုတျခမျးသား နှဈဖကျဖွငျ့ ညှဈထားလိုကျသညျ။ ‘ ဖွေးဖွေး .. လိုးပါ .. ကိုကိုရယျ .. ’ ‘ အေးပါ .. ခ လေးရယျ.. မနာစရေပါဘူး .. ’ ခှနျပိုငျက .. ပါးစပျက သာ မနာပါဘူးဟု ပွောနသေျောလညျး ဆောငျ့နခွေငျးက ရပျမသှား ကွီးပွနျ ထုတျလိုကျတိုငျး..ေ-ာကျဖုတျလေးမှာ အပွငျသို့ သုံးလကျမနီးနီး ..ခပျစူစူလေး ပါလာတတျလသေညျ။ ထိုအခါမြိုးတှငျေ-ာကျ ဖုတျလေး၏ အတှငျးသား ရဲရဲလေးမြားမှာ ရဲကနဲ ပါလာကွသညျ။
အတနျငယျဆောငျ့ပွီး .. နို့ကွီးနှဈလုံးကို အောကျမှ လကျလြှိုနှိုကျပွီး .. အားရပါးရ သုံးလေးခကျြမြှ ဆောငျ့ခလြိုကျလတေော့သညျ။ ‘ အငျး.. အငျး .. ကောငျးလိုကျတာ .. ကိုကိုရယျ .. ’ လေးဘကျကလေးထောကျရငျး ..မကျြလုံးလေးမှေးကာ နနျးအိဝါ ငွီးငွီးငွူငွူ လေးပွောရငျးေ-ာကျခေါငျး အတှငျးမှေ-ာကျရညျမြားကို ပနျးထုတျလိုကျမိလတေော့သညျ။ ခှနျပိုငျမှာလဲ .. အရမြေား ရှဲရှဲစိုလာ သော နနျးအိဝါေ-ာကျဖုတျလေးကို .. အသံကယျြကွီး မြားပွညျ့ အောငျ ဆောငျ့ပွီး .. သူ၏ ဆီးစပျနှငျ့ နနျးအိဝါ ဖငျဖွူဖွူလေးကို တအားကွီး ကဈြကဈြပါအောငျ ဆှဲဆောငျ့လိုကျပွီးေ-ာကျခေါငျးလေးထဲသို့ သုတျရညျမြားကို ပနျးထဲ့ လိုကျတော့ သညျ။
‘ ကြျောကြျော .. နငျ .. ပွနျတော့ … ’ ‘ ဟငျ .. နငျ ဘာနဲ့ ပွနျမှာလဲ .. ငါပွနျပို့ပေးမယျလေ .. ’ ‘ မလိုပါဘူးဟယျ .. လှတျလှတျလပျ လပျပဲ နခေငျြတယျ .. . ’ ကြျောကြျောသကျပွငျး ခရြငျး .. စောမွသူဇာ စိတျကို သိထားသူပီပီ .. စကားထပျမပွော တော့ပဲ ကားကို မောငျးထှကျခဲ့ လသေညျ။ ‘ မွသဲစံအိမျ ’ ခနျ့ညားထညျဝါလှသျောလညျး ရနေံရောငျမှောငျမှောငျနှငျ့ ငွိမျသကျနခွေငျးက ခွောကျ ခွားတုံလှုပျဖှယျ ကောငျးနသေညျ။ ကြျောကြေျာ့ကို သူဇာက နိုငျလှနျးသညျ။ တကယျတော့ .. စောမွသူဇာ .. မွသဲစံအိမျသို့ အပွီးအပိုငျ ထှကျလာခဲ့ခွငျး သာ ဖွဈသညျ။ သညျအိမျကွီးမှာပငျ နနျးဥမ်မာ နှငျ့ ခနျြးဆိုထားခဲ့သညျ။ နနျးဥမ်မာက .. သူဇာ့ အတှကျ အတှငျးရေး တိုငျပငျစရာ အကောငျးဆုံး သစ်စာအရှိဆုံး သူငယျခငျြး ဖွဈသညျ။ မကွာမီ ခြောကလကျရောငျ .. လငျဆာကားလေး တဈစီးခွံထဲသို့ လြောကနဲလှိမျ့ဝငျလာသညျ။
ကားမောငျးသညျက နနျးဥမ်မာအကိုစောခှနျပိုငျ.. ခနျ့ငွားပွီး .. ယောကျြားပီသ သူမို့ .. သူဇာ ငေးနမေိပွီးမှ ..သတိဝငျလာကာ .. နနျးဥ မ်မာကို နှုတျဆကျသညျ။ ‘ နောကျကလြိုကျတာ .. ဥမ်မာရယျ .. ’ ‘ ကိုလေးပေါ့ .. ဈေးထဲ ဝငျနသေေးတယျလေ .. ’ ‘ ခဏလေးပါ ဟာ .. နငျတို့ကလဲ .. ’ ခှနျပိုငျက .. စီးကရကျ တဈဘူးကို ထုတျယူလကျြ ဆေးလိပျတဈလိပျကို မီးညှို့ဖှာရှိုကျခါ ခွံထဲသို့ မကျြစေ့ ကစားလိုကျသညျ။ ထိုအခါ အိမျကွီးနောကျဘကျရှိ ရကေနျစပျတှငျ ပုံ့ပုံ့လေးထိုငျကာ ငါးမြှား နသေောနနျးအိဝါကို တှလေို့ကျရလေ သညျ။ နနျအိဝါက.. ရပွေငျကို .. ငေးနသေညျ။ ငယျရှယျနုပြိုမွဈသော .. အိဝါ၏ တငျပါးကွီးမြားက အရှယျနှငျ့ မမြှအောငျ ကွီးမား ဖှံ့ဖွိုးလား ခဲ့သညျမှာ ..ခှနျပိုငျ မကွာခဏ ချေါပွီး ဖွုတျနခေဲ့သညျ့ အခြိနျမှ စခဲ့သညျ။ နနျးဥမ်မာက .. ကားထဲမှ စားစရာ အခြို့ကို လှမျးယူပွီး .. စောမွသူဇာနှငျ့ အတူ ဧညျ့ခနျးထဲ သို့ ဝငျသှားကွ၏။
မိမိညီမ နှငျ့ ရှယျတူဖွဈသော စောမွသူဇာသညျ ခှနျပိုငျရငျ့ကို လှုပျရှား စသေညျ။ ထငျးရှူးပငျမြား လတေိုးသံကိုသာ ကွားနရေ သော ခွံကယျြကွီးထဲ၌ ဤမွသဲစံအိမျ ကွီးမှာ .. တထီးတညျး အဖျောမဲ့စှာ .. ရပျတညျနသေယောငျ ။ နနျးအိဝါ.. ခှနျပိုငျကို လှမျးမွငျ သှားသညျ။ လကျထဲမှ ငါးမြှားတံကို ပဈခပြွီး .. အပွေးကလေး လာလသေညျ။ ခှနျပိုငျ တုနျလှုပျသှားသညျ။ ဒီဟာမလေးက တဈခါတဈလေ ဇှတျတရှတျ လုပျတတျသညျ။ ‘ ဘာလာ လုပျတာလဲ .. ကိုကို .. ’ ‘ နနျးဥမ်မာသူငယျခငျြးကို ..လာပို့ကွတာပေါ့ .. ညကရြငျ ကိုကိုလာမလို့ .. အိဝါ စောငျ့နနေျော ခလေး .. ’ ‘ တဈကယျ.. မဟုတျပဲနဲ့ … ဟှနျ့ .. .. လာမယျဆိုပွီး မလာတာ ဘယျလောကျကွာပီလဲ .. သှားပါ .. ’
‘ အလုပျတှမြေားနလေို့ပါ သဲလေးရယျ ဒီည ကိုကို ကိုးနာရီအရောကျ လာခဲ့မယျ ဟို အခနျးကပဲ စောငျ့နျော’ ‘ အမွဲ စောငျ့နသေူပါ .. ကိုကို ရယျ .. ’ ‘ ကဲ.. နနျးဥမ်မာတို့ ရိပျမိသှားဦးမယျ .. နျော .. သှားတော့ နျော .. ခလေး .. ’ ‘ အငျးပါ .. ကိုကို ရာ … .. မနှငျပါနဲ့ . . ’ မကျြနှာလေးက ညှိုးငယျပွီး ထှကျသှားသော အိဝါနောကျကြောလေးကို ကွညျ့ရငျး ခှနျပိုငျ သကျပွငျးလေး ခမြိသညျ။ ‘ ခြာတိတျ .. လေးတှေ ခဈြရတာ မလှယျပါလား .. ’ ဧညျ့ခနျးထဲသို့ စောမွသူဇာနှငျ့ နနျးဥမ်မာတို့ ခေါငျးခငျြး ဆိုငျနသေညျ။ ‘ ကဲ .. အဲ့ဒီ့ .. ဒေါကျတာ … မငျးထိုကျက ဘယျကလဲ … ’ ‘ မမေေ . . သဘောတူတဲ့ လူပဲ .. အသကျ (၃၀) လောကျ ရှိတယျ .. သူ့ကို ဘယျလိုမှ လကျမထပျခငျြဘူး ’ ‘ ခကျတာက … နငျ့မှာလဲ .. ဘဲမရှိဘူး .. ’
‘ အိမျကိုတော့ ခုလောလောဆယျ ခဏရှောငျနတော .. အကောငျးဆုံးပဲ .. ’ ‘ အေးပေါ့ .. ခုတော့ .. ဒါပဲ .. ရှိတာပေါ့ .. ’ နှဈယောကျ သား စကားအနညျးငယျပွောပွီး ပွနျထှကျလာကွသညျ ။ ခှနျပိုငျက .. စကျနှိုးပွီး ကားကို အသငျ့ စောငျ့နသေညျ။ ‘ နနျးဥမ်မာတို့ .. အိမျပဲ .. မောငျးတော့ ကိုကို ’ မွသဲစံအိမျ အတှငျးမှ ကားလေး လှဈကနဲ ပွေးထှကျသှားသညျကို အိဝါ တဈယောကျ အုနျးပငျ အကှယျမှ ညှိုးငယျစှာ ရငျမောကနျြရဈသညျကိုကား မညျသူမြှ သတိမထားမိလိုကျ ကွခြေ ။ ညသညျ ပိုမိုနကျရှိုငျးလာနသေညျ။ မှားသှားပလားဟု ကိုယျ့ဖာသာ ကိုယျတှေးရငျး အိပျမပြျော ဖွဈနမေိလသေညျ။ အိမျသို့ ပွနျပွီး ပစ်စညျး ပစ်စယမြား ယူလကျြ ဥမ်မာနှငျ့ တိုငျပငျပွီး မွသဲစံအိမျကွီး ကိုပငျ ရှေးခယျြလကျြ ပုနျးအောငျးရနျ ဆုံးဖွတျခဲ့ကွသညျ။ နနျးဥမ်မာက ရိကျခာအစို အခွောကျ မြား.. ထမငျးခြိုငျ့ကို .. နစေ့ဉျလာပို့ပေးရသညျ။
ကိုယျ့ဒုကျခ .. ကိုယျရှာသညျပဲ ပွောပွော .. လတျတလောတော့ သူဇာ ပြျောရှငျှမိနေ သညျ။ ဘာအခြုပျအခယျြမှ မရှိ .. ပကတိ လှတျလပျမှု့ အရသာကို အပွညျ့အဝ ခံစားနမေိသညျ။ ကုတငျလေးပျေါ သို့ လှတျလပျစှာ ဖွဲကား အိပျနပေုံလေးမှာ ခလေးဆနျစှာ လှပလှနျးနသေညျ။ ဖွူဖှေးသော ဆငျစှယျနှဈရောငျ အသားအရလေေးက ရဆေေးငါးကွီးသဖှယျ .. တဈကိုယျလုံး လိုးခငျြစရာ ကောငျးလှလသေညျ။ ကွီးမားသော ဖငျအံကွီးက မှယေ့ာထကျ၌ ဆောငျ့လိုကျလြှငျ .. အိကနဲ ကနျတကျလာမညျ့ အနအေထား မြိုးရှိသညျ။ေ-ာကျဖုတျလေး က လုံးဝ သနျ့စငျသော အရုပျကလေး တဈခုအလား .. အရောငျ တဈဖိတျဖိတျ တောကျနလေေ သညျ။ နနျးဥမ်မာ ညက ပွောသှားသော စကားကွောငျ့ စောမွသူဇာ အိပျ၍ မပြျောဖွဈနရေလတေော့ သညျ။
‘ တစ်ဆတှေေ .. သရဲတှဆေိုတာ .. မရှိဘူးလဲ ပွောလို့ မရဘူး .. ဒါပမေဲ့ ကိုယျ့အိမျပဲဥစ်စာ .. မကွောကျနဲ့ .. ’ မကွောကျနဲ့ ဆိုမှ စောမွ သူဇာ ကွောကျ ခငျြလာသညျ။ ထငျးရူးပငျမြား .. လတေိုးသံက တရူးရူး နှငျ့ ကွားနရေပွီး တဈခါတဈရံ ညဌကျကလေးမြား .. ဖွိုး ဖွိုးဖြောကျဖြောကျ အျောသံ လေးမြား ကွားနရေသညျ။ နခေ့ငျးက အပူရှိနျကွောငျ့ အိမျကွီး၏ ပဉျြခပျြမြား .. တကြီကြီ နှငျ့ မွညျ နသေံလဲ သူဇာသိသညျ။ မပိတျပဲထားသော ပွူတငျး တံခါးမြား လတေိုးသဖွငျ့ ဒိုငျးကနဲ ဒိုငျးကနဲ စောငျ့ပိတျသှားသညျ့ အထိလဲ သူဇာ မလနျ့ .. ‘ အား .. အား .. နာတယျ .. ကိုကိုရယျ .. ဖွေးဖွေး .. ဖွေးဖွေး ပါ .. ကိုကိုရယျ .. လိုး ..အား …’ ‘ ဗွဈ .. ဗွဈ .. ပွှတျ .. ဘှတျ .. ဘှတျ .. ’ ဆိုသော အသံမြားကို သူဇာ .. အဖွေ မထုတျတတျ .. မမေေ .. စောမွတျသန်တာကို ဝဏ်ဏ နှငျ့ စောပွညျ့တို့ ဝိုငျး – နကွေခွငျးလား။
အဲ့ .. ဒါကိုတော့ .. သူဇာ ကွောကျတယျ .. တျော ကွာ ကို့ရှမှေ့ာ သရဲတှေ က မိမိကိုပါ – လာလငျြ မခကျလား .. ‘ ကောငျးလိုကျ တာ.. ကိုကိုရယျ .. ကြှတျ .. ကြှတျ .. တအား ဆောငျ့ပါ ကိုကိုရယျ .. ဆောငျ့ ဆောငျ့ ပါ ..’ မိနျးကလေး အသံက သနားစဖှယျ ကောငျးနသေညျ။ အသံက တိုးလှနျးသျောလညျး တိတျဆိတျသော ညယံကို ထှငျးဖောကျ၍ အပျေါထပျညာဘကျ အခနျးဆီက လိုလို .. အခနျးလှတျမြားစှာကလညျး ရှိနရေကျ စောမွတျသူဇာ ဇဝဇေဝါဖွငျ့ နားကို စှငျ့နမေိသညျ။
‘ ကွီးကလဲ .. အကွီးကွီးပဲနျော .. အဟငျးဟငျး .. ’ ‘ ဦးမလို့လားဟငျ .. တျောတော့ ကှာ .. .. ’ ‘ ကိုကိုကလဲ .. ပုံစံ အမြိုးမြိုးနဲ့ လဲ ပွီးပွီ .. ခုထိ သူမကနြေပျသေးဘူး .. ကွညျ့ ပါလား .. အဟငျ့ .. ’ အသံမြားကို သူက .. နားစှငျ့ နသေညျမှတပါး အခွားလှုပျရှားမှု့ တဈစုံတဈရာ မပွုဝံ့ ။ သဘာဝ အတိုငျး တဈအိမျလုံး၌ တဈယောကျဆိုသော အသိက သူဇာ့ကို လှမျှးမိုးထားသညျ .. အလိုလို နေ ရငျး ကွောကျနပွေီး .. ည(၁၂) နာရီ ပတျဝနျးကငျြမှ အသံမြား ရပျဆိုငျး သှားလေ သညျ .. ပွီးမှ စောမွသူဇာသညျလညျး အိပျပြျော နိုငျခဲ့လသေညျ။
‘ ကြှီ .. ဝုံး .. .. အမလေး .. ’ ရုတျတရကျ .. အခနျးတံခါး ထောငျ့ပှငျ့သှားခွငျး နံရံနှငျ့ ဆောငျ့မိသဖွငျ့ သူဇာ လနျ့သှားလေ သညျ။ လပွေငျး တဈခကျြ ဆောငျ့တိုကျလိုကျ ခွငျးဖွဈသဖွငျ့ စောမွသူဇာ ခွောကျခွားနရောမှ သကျပွငျးခနြိုငျ သညျ။ ည .. ဆိုသော .. ဆောငျး၏ လှာရုံသညျ . ပိနျးပိတျအောငျ မှောငျနပွေီး နှငျးမှုံတှလေညျး ဝဝေဲ့ကြ နခွေငျးကို အထီးကနျြဆနျနသေလိုလို ခံစားရ သညျ။
အခြိနျသညျ ယမနျနကေ့ကဲ့သို့ပငျ တရှရှေ့ေ့ နကျရှိုငျး ပိနျးပိတျသော အလှာခွုံစောငျကွီးကို ကမ်ဘာလောကကွီးအား လှမျှးခွုံထား လသေညျ။ စောမွသူဇာလညျး အပျေါထပျလှခေါးမှ ဆငျးလာသညျ။ ညဝတျအင်ျကြီဖါးဖါးကွီးကို အခုအခံမပါ ဝတျထားသဖွငျ့ပနျးပု ရုပျ ကလေးပမာ လှပကြော့ရှငျးနသေညျ။ လှခေါးအတိုငျးဆငျး လာပွီး ဧညျ့ခနျးဆီသို့ လှမျးမညျအပွု၌ ‘ စောမွသူဇာ .. ’ ဟု .. ခပျ အုပျအုပျ ချေါသံကို ကွားလိုကျရလသေညျ။
အနီးရှိ နံရံတှငျ ကြောကပျ မှီရပျရငျး နားစှငျ့ နလေိုကျလသေညျ။ ‘ စောမွသူဇာ ကိုယျပါ .. ခှနျပိုငျပါ .. ဒီမှာ .. ’ ခှနျပိုငျမှနျး သိမှ စောမွသူဇာ အားတကျဝမျးသာသှားသညျ။ ဧညျ့ခနျးဆီသို့ ပွေးဆငျးလာခဲ့လသေညျ။ ‘ အကို .. .. အကို ခှနျပိုငျလား .. ဟငျ ’ ‘ အေး .. အကို ခှနျပိုငျ ပါ .. ဒီမှာ .. လာလာ .. သူဇာတဈယောကျထဲ ဘယျလိုနမေလဲလို့ ဥမ်မာက ကွညျ့ခိုငျးလိုကျလို့ လာကွညျ့ရတာ ။ ’
‘ အဟငျး .. ဘယျလိုနမေလဲ .. ဟုတျလား .. ကွောကျနတောပေါ့ .. တဈယောကျ ထဲဟာကို .. ’ အပွငျမှ .. အလငျးရောငျ ဖြော့ ဖြော့တှငျ သူဇာသညျ မိမိကိုယျကို မသုံးသပျမိပဲ ခှနျပိုငျနားသို့ တိုးကပျသှားမိသညျ။ ခှနျပိုငျကိုယျမှ မှေးကွိုငျသငျးပြံ့သော ရမှေေးနံ့ က ကွိုငျလှိုငျစှာ ထှကျနသေညျ။ ညဝတျဇာ ဖွူပါးပါးကွီးက .. သူဇာခနျဓာကိုယျ ဝတျလဈစလဈကလေးကို လုံခွုံမှု့ မပေးနိုငျ ဖွဈ နသေညျ။
အဖုအထဈ အလုံးအကဈြမြားက ခှနျပိုငျ့ကာမစိတျကို တရိပျရိပျ တရှိနျရှိနျဖွငျ့မွငျ့မား လာနစေတေော့သညျ။ ခှနျပိုငျ့မကျြလုံးမြားက တလကျလကျ တောကျပလာနလေသေညျ။ အမှတျမထငျ စောမွသူဇာ ပုခုံးလေး နှဈဖကျကို သိမျးယူပှငေ့ငျလိုကျရာ .. စောမွ သူဇာ၏ ကိုယျခနျဓာလေးမှာ ခှနျ့ပိုငျ ရငျခှငျထဲ၌ နှေးထှေး အိစကျစှာ ပုံလကျြသားလေး ရောကျရှိသှား လသေညျ။
‘ သူဇာ .. ကွောကျတယျ .. အကို .. ကွောကျတယျ .. ’ သူဇာက ကွောကျတယျ ဆိုသော စကားကို အထပျထပျ ရှတျဆိုရငျး ခှနျပိုငျ့ ရငျခှငျထဲသို့ မကျြနှာကို တိုးဝငျ လာသညျ။ အသကျရှူသံမြားက မုနျတိုငျးထနျလာသညျ။ နှဈဦးသား၏ သှေးသားဆူပှတျမှု့တို့ကရငျခုံ သံမြား အဖွဈသို့ အသှငျပွောငျးကာ .. တဒိတျဒိတျ နှငျ့ နှဈဦး သား ရငျခငျြးအပျကာ ကွားနကွေရသညျ။
‘ ခဈြတယျ .. သူဇာရယျ .. ’ ‘ ဟငျ့ .. .. အငျ .. ’ အဓိပ်ပါယျ ဖှငျ့ဆိုရခကျသော စကားတဈလုံးကို သူဇာက ရှကျပွုံးလေးဖွငျ့ ရှတျဆို ရငျး .. ခှနျပိုငျ့ ရငျဘတျကွီးကို ရှကျရှကျနှငျ့ပှတျသပျနေ၏။ ခှနျပိုငျ့ လကျမြားက.. နို့ကွီးနှဈလုံးကို ပယျပယျ နယျနယျကွီး အုပျကိုငျ ပွီး .. တရှရှ ပှတျသပျ စပွုလိုကျလရော .. ‘ အို့ .. အကို .. ရယျ .. ’ ခှနျပိုငျ လကျမြားကို အသာအယာ အုပျကိုငျရငျး သူဇာ ငွီး တှားသညျ။ တဖွေးဖွေးရငျခုံသံမြားက အသားတဆတျဆတျ တုံရီ ခွငျးမြားက အရိုငျးမလေး သူဇာ တဈကိုယျလုံးကို လှမျးခွုံ အုပျစိုး လာလသေညျ။ နှုတျမှ .. တဟငျးဟငျး .. အဖြား တကျသလိုလဲ ငွီးနသေညျ။
‘ အင်ျကြီကွီး .. .. ခြှတျလိုကျ မယျနျော .. သူဇာ .. . ’ ‘ အို .. အကို .. ’ သူဇာ့ စကားမဆုံးမီ .. ညဝတျအင်ျကြီကွီးက ကွမျးပွငျပျေါသို့ ပုံ ကသြှားလသေညျ။ ခှနျပိုငျ့ ရငျမြား .. ပူလောငျ နှေးထှေး လာသညျ။ လညျခြောငျးဝ၌ တဈဆို့သော ဝဒေနာ တဈခုကိုလညျး ခံစားလာ ရ ပွီး တံတှေးကို .. ဂလုကနဲ့ မွိုခလြိုကျရလသေညျ။ သူဇာ့ ရငျ၌မူ .. အ – ခံရတော့ မညျ ဟူသော အသိကွောငျ့လားမသိ ရငျခုံ ခွငျး ဝဒေနာထကျ အလှနျအမငျး တဆတျဆတျ တုံနသေော .. လကျဖြားခွဖြေား မြား နှုတျခမျးပါးလေး မြားကို .. ကွိုးစား ထိနျးသိမျးနရေလသေညျ။ ‘ အို .. အကို .. ’ တကယျပါ .. သူဇာ ဘယျယောကျြားလေး တဈယောကျရဲ့ အထိအတှကေို့မှ မခံစားဘူး ကာ ခုလို မဲ့ အဆငျ့အထိ .. အကို ခှနျပိုငျ ပွငျဆငျနတောကွီးက သူဇာအဖို့ တုနျလှုပျခွောကျ ခွားစတော အမှနျပဲ ဖွဈသညျ။
သူဇာရဲ့နို့ကွီး နှဈလုံးကလဲ ဆှဲဆောငျမှု့ အပွညျ့ရှိနသေညျကလညျး အမှနျဖွဈသညျ။ ဖွူဝငျးသနျ့စငျနတေဲ့ နို့အုံကွီးတှကေို .. အကို ခှနျပိုငျ.. ဆုပျကိုငျ နယျဖတျနတေော့ သညျ။ သူဇာ့ေ-ာကျဖုတျလေး .. .. ရှစိ ရှစိ ဖွဈလာတာ အမှနျပဲလို့ မရှကျတမျးဝနျခံလိုကျခငျြ သညျ။ အကိုကနို့ကွီးတှကေိုဆုပျကိုငျနပွေနျတော့ သူဇာ့မကျြနှာလေးကို မော့ပွီး ပါးစပျလေးဟပွီး တအငျးအငျး နှငျ့ ငွီး နမေိသညျ။ဘာပဲဖွဈဖွဈ . . အကို့ .. အယုအယ .. အကိုငျ အတှယျ တှကေ အခံခငျြလာအောငျ ဆောငျရှကျနိုငျကာ .. သူဇာ ကိုယျတှခေံ့စား လာ ရသညျ ..
‘ ဟော .. အို့ .. ကွညျ့ပါဦး ..’ သူဇာ့ေ-ာကျဖုတျ လေးထဲကို လကျကွီးနဲ့ နှိုကျပွီး မှေ နပွေနျပါပွီ .. ခကျလိုကျတာ .. မရှံမရှာ .. ဟငျ ..ေ-ာကျစိလေးကိုလညျး ပှတျနပွေနျပွီကှယျ .. အို . သူဇာ တဈကိုယျလုံး မွောကျတကျပွီး လမှော လှငျ့ နရေသလိုလို ..ခွဖြေားလေးတှကေ ထောကျကားပွီး ပေါငျလေးနှဈဖကျ ကိုကားပေး နမေိပွနျပါသညျ။ ခှနျပိုငျရဲ့ လကျမြားအလုပျရှုပျနေ သလောကျ သူဇာ့ ခမြာ အလူးအလဲ ခံစားနရေရှာပါသညျ။ေ-ာကျပတျလေးထဲမှ .. အရကွေညျလေးမြားက တသှငျသှငျ ကဆြငျး လာပွီး .. မကျြလုံးလေး မှေးစငျးပွီး တအငျ့အငျ့နှငျ့ ညီးနတေဲ့ သူဇာ့ ကိုယျလုံးလေးကို .. အနီးမှာ ရှိတဲ့ စားပှဲတဈလုံးပျေါသို့ ထိုငျ ခိုငျးလိုကျသညျ။ ပွီး .. ခွနှေဈခြောငျးကို စားပှဲပျေါသို့ တငျပွီး ဆောငျ့ကွောငျ့လေး ထိုငျခိုငျးလိုကျရာ ..
သူဇာေ-ာကျဖုတျလေးမှာ ပွဲအာကာ နီနီရဲရဲလေး .. ပှငျ့ အာနလေတေော့သညျ။ အကိုက ဒီတော့မှ သူ့ ကွီးကို ပှဲထုတျလိုကျသညျ။ မွှဟေောကျအနကျမြိုး တောကျပွောငျ နသေညျ။ မမွငျဖူးသော သူဇာ က မမှိတျမသုနျကွညျ့ရငျး ကွောကျသလိုလို ရှံ့သလိုဖွဈ နသေညျ။ ဒါကွီးက မိမိေ-ာကျဖုတျထဲ .. အဆုံးအထိ ဝငျမှာပါလားဆိုသော အသိက ရငျကို အပွငျး အထနျ ခုံစသေညျ။ စားပှဲ စှနျး၌ ဆောငျ့ကွောငျ့လေး လကျနောကျပွဈ ဖငျလေးကို စားပှဲကွမျးပွငျနှငျ့ ထိထိုငျထား သော သူဇာ့ ဒူးခေါငျးနှဈလုံးက တ ဆတျဆတျ နှငျ့ တုံနလေသေညျ။ ကွီးက မိမိေ-ာကျဖုတျကလေး၌ တလေို့ကျရာ ..ေ-ာကျပတျနှငျ့ ပထမဆုံး အကွိမျ အထိခံရ ခွငျးဖွဈ၍ စအိုလေး ရှုံ့သှားပွီး ဖငျလေးကို တှနျ့သှားမိသညျ။
အကို့လကျကွီး နှဈဖကျက ခါးလေးကို ဆှဲကိုငျပွီး . ဒူးနှဈလုံးကိုပါ လိမျပိုကျလကျြ ကွီး ကိုဖိသှငျးလိုးခလြိုကျ လသေညျ။ ‘ ပွဈ .. ဗ ရဈ .. ပွှတျ ..’ ‘ အငျ့ .. အငျ့ .. ဟငျး .. ’ နှုတျခမျးနှဈလှာကို တငျးတငျးစု .. မကျြစလေ့ေးမှိတျပွီး ခေါငျးလေးကတဖကျသို့စောငျး ကာ သူဇာ ငွီးငွူလိုကျရှာလသေညျ။ တပွညျ့တခဲ တငျးတငျးကွပျကွပျကွီး ဝငျလာသော – ကွီးကွောငျ့ေ-ာကျခေါငျး လေးထဲ၌ လကွေောငျး အန်တရယျအခကျြပွ ဥသွသံ ကွားရသော လူမြားကဲ့ သို့ ရုတျတရကျ .. ဗွောငျးဆနျပွီး .. လှုပျလှုပျရှားရှား ကွီး ဖွဈကုနျ သညျ။ ဝရုနျးသုနျးကား .. လှုပျရှားနကွေသောေ-ာကျခေါငျး အတှငျးသားမြားကို ကွီးက ပှတျတိုကျပွီး သားအိမျဆီသို့ ဒလ ကွမျးဝငျ သှားလရော သူဇာ့ ခမြာ ဖိနျ့ဖိနျ့ တုံအောငျပွီး .. သှကျသှကျခါ သှားရလသေညျ။
ခှနျပိုငျကလညျး .. အသဈစကျစကျေ-ာ ကျဖုတျလေး ကို အပိုငျအနိုငျ ခှငျ့ ရပွီမို့ အားရပါးရ ကွီး ဆောငျ့နလေတေော့သညျ။ ‘ နာ .. လိုကျတာ .. အကိုရယျ .. အထဲက ကငျြ တယျ .. ’ ခှနျပိုငျက .. အနညျးငယျ လြော့ပွီး ..ဆောငျ့ကာ .. ခွတေဈခြောငျး ကို ပုခုံးပျေါသို့ ထမျးယူ ပွီး ပိုမိုပွဲကားလာ သောေ-ာ ကျဖုတျလေးထဲသို့ လကျနကျကွီးမြား ပွဈသှငျးနသေကဲ့သို့ တဈလုံးပွီး တဈလုံး ပိုငျပိုငျကွီး ဆောငျ့ခလြိုကျရာ ..
‘ အငျ့ .. .. . အငျ့ .. .. . အား .. .. . အား .. . . ဘာတှေ ထှကျကုနျ ပီလဲ မသိဘူး ..’ သူဇာ က ခလေးလေး လို ငွီးဆောငျ့သှားပွီး ခှနျပိုငျ့ လကျမောငျးကွီးကို လှမျးဆှဲထား လိုကျ လသေညျ။ ခှနျပိုငျကလညျး .. သူဇာ ပွီးသှားမှနျး သိလိုကျသညျ။ ခွနှေဈခြောငျးကို မိမိခါးတှငျ ကပျကြေးကိုကျ ဆှဲယူပွီး သူဇာ့ အပျေါသို့ မှောကျခလြိုကျပွီး ဖငျကွီးကို အားရှိပါးရှိကွီး မွှောကျကာ ဆောငျ့လိုကျပွီး .. သူဇာ့ေ-ာကျခေါငျးလေး ထဲသို့ သုတျရမြေား ကို ခပျပွငျးပွငျးလေး ပနျးထုတျလိုကျလေ သညျ။
သုတျရမြေားကေ-ာကျပတျအကှဲကွောငျးလေး မှ ယိုစိမျ့ စီးဆငျး လာလတေော့သညျ။ ‘ ဝှီး .. . .. .. ဒုတျ .. .. . ငါလိုးမသား .. လူပါးဝလိုကျတာ … .’ ဓါးမွောငျက နံရံသို့ ပဈပေါကျလိုကျပွီး ပွငျးထနျစှာဆဲဆို ကွိမျးမောငျး နသေူကား .. ကြျောကြျော ဖွဈသညျ။ ဦးစပျခှနျကွာက သမီး ဖွဈသူ .. အိမျမှ ရုတျတရကျ ပြောကျဆုံးသှား၍ နောကျဆုံးအတူရှိခဲ့ သော ကြျောကြေျာ့ကို ချေါယူ စုံစမျးရငျးမှ စ၍ .. ညက ကြျောကြျော တဈယောကျ မမြှျောလငျ့ပဲ မွသဲစံအိမျသို့ ရောကျခဲ့ သညျ။ စီးလာသော ဟှနျဒါ ဆိုငျကယျ လေးကို .. ခွံ၏ ထငျးရူးပငျ၌ ထားခဲ့ပွီး အိမျရှသေို့ အရောကျ ဧညျ့ခနျးမှ မွငျကှငျး .. ကြျောကြေျာ့ရငျဝကို .. လောငျခြာနှငျ့ တေ့ ပဈလိုကျ သလိုမြိုး ခံလိုကျ ရလသေညျ။
ကွညျ့ပါဦး .. ဧညျ့ခနျးထောငျ့ စားပှဲလေး ပျေါ၌ စောမွသူဇာကို .. ဆောငျ့ကွောငျ့လေး ထိုငျခိုငျးပွီး အားရပါးရကွီး ဖွုတျနသေော ခှနျပိုငျကို တှရေ့သညျ။ စောမွသူဇာသညျ ကြျောကြေျာ့ အသဲ .. အသကျ .. မနမျးရကျ . မခြူရကျ သော .. ပနျးလေး ကိုမှ .. ခှနျပိုငျက . ပယျပယျ နယျနယျကွီး .. ခွမှေ ဖကျြဆီးခဲ့ လသေညျ။ သညျကတညျးက ကြျောကြျော .. ဘောငျးဘီအိတျထဲက မောငျးပွနျဓါးကို ကိုငျမိလိုကျလသေညျ။ သို့သျော .. စောမွသူဇာ .. ကိုယျတိုငျကိုက ခှနျပိုငျ့အား ပေါငျလေး ဖွဲဖွဲပွီး ကော့ကာ ကော့ကာ အခံ နပေုံက .. အလိုတူ အလိုပါ ပုံစံ ဖွဈနလေတေော့ သညျ။
ရှမ်းပြည်ဆောင်းညသည် အအေးရက်စက်လွန်းနေသည်။ ‘အခွန်ဘဏ္ဍာန်တော်များကို ဗိုလ်ယက်ခနှင့် တပည့်များက သိမ်းပိုက် လိုက်ပါပြီ ခင်ဗျား’… ‘ဟင်…တောက်…ယက်ခခွေးမျိုး’ စပ်ခွန်ကြာ လက်သီးနှစ်ဖက်ဆုပ်ရင်း…အံကြိတ်လိုက်သည်။ ‘မောင်ကျော်’ … ‘ဖရာ့’… စောမြတ်သန္တာ … သမီးငယ် နို့စို့နေရာသလွန်ထက်မှ ဖရိုဖရဲလူးလဲထပြီး… စပ်ခွန်ကြာထံ အပြေးကလေး လာ၏။ ရုတ်တရက်ထလိုက်၍ ရှည်လျားသောနန်းတွင်းလုံချည်က ပိုးသားပျော့ပျော့မို့ လျောပုံဆင်းသွားလေရာ စောမြတ်သန္တာ တင်ပါးဝိုင်းဝိုင်းကြီးများမှာ ဝင်းကနဲပေါ်ထွက်သွားပြီးပေါင်တံ ဖြူဖြူကြီးများမှာ ခုံထမောက်မို့နေသောေ-ာက်ဖုတ်ကလေးမှာလဲ တန်းကနဲပြူးထွက်လာခဲ့ ရလေသည်။
ထိုအခါ စိုင်းဝဏ္ဏမျက်လုံးများက ဝင်းဝင်းတောက်ပသွားပြီး စောမြတ်သန္တာ၏ေ-ာက်ဖုတ် လေးကို တဝကြီးမြင်လိုက်ရာ ရင်ထဲပူနွေးသွားပြီး တလှပ်လပ်ှခံစားလိုက်ရလေသည်။ စောမြတ်သန္တာမှာလည်း ရှက်လွန်း၍ ထမီ ကို ကောက်ယူကာ….သလွန်စီသို့ ပြေးဝင်သွားလေသည်။ စပ်ခွန်ကြာမှာကျောပေးကာဟော်နန်းအပြင်သို့ အံတကြိတ်ကြိတ်နဲ့ ကြည့်ရင်း ဒေါသဖြစ်နေမိ၍ သတိမထားမိလိုက်ရှာပေ။ ‘စိုင်းဝဏ္ဏ…’ ‘မှန်…မှန်ပါ့ဖရား…အမိန့်ရှိပါအရှင်’ … ‘ယက်ခကိုဖမ်းဘို့… လူစု…အခုထွက်မယ်’ … ‘မှန်ပါ့ဖရာ့’… စိုင်းဝဏ္ဏ အပြေးထွက်ခွာသွားလေ၏။ နှင်းတွေကတဖွဲဖွဲကျနေသည်မို့ အရာခပ်သိမ်း ဝေ့ ဝဲနေကြ၏။ တိတ်တဆိတ် ချီတက်နေသော ဗိုလ်ယက်ခတို့ စခန်းကို ဝိုင်းထားကြသည်။ သို့သော် အသံကစိုးတစ်မျှ မကြားရ၊ မီး ရောင်လက်လက်ကလေးမှမမြင်ရ… စပ်ခွန်ကြာနှင့် လက်စွဲတော်သူရတို့ စခန်းထဲဝင်၏။
‘ ဝဏ္ဏ … ဘယ်ရောက်နေလဲ’ ‘ တပ်သားတွေကြားထဲမှာ တွေ့ခဲ့တယ် ဖုရာ့ ..အချက်ပေးတာနဲ့ ဝင်တိုက်ဖို့ အသင့် ပြင် နေပါတယ် ..ဖရာ့’ တဲအတွင်းသို့ .. စပ်ခွန်ကြာတို့နှစ်ယောက် ခုန်ဝင်လိုက်၏။ ‘ဟင်… တော်ဘုရားကြီး ပါလား ’ ဗိုလ်ယက်ခက ဝတ်လစ်စလစ် ဖြင့် မိန်းခလေးတစ်ယောက်ကို ခြေနှစ်ချောင်း မိုးပေါ်ထောင်ပြီး ပယ်ပယ် နယ်နယ် -ုပ်နေစဉ် ဖြစ်သည်။ ‘ အောင်မလေး ’ အသက် (၁၅) နှစ်ခန့်သာ ရှိသေးသော မိန်းကလေးမှာ အိပ်ယာက လူးလဲထပြီး စောင်ကြီး ရစ်ပတ်လျှက်.. စပ်ခွန်ကြာ ရှေ့၌ ဗိုလ်ယက်ခ နှင့် အတူလက်ထောက် ခေါင်းငုံ့ကာ … လက်အုပ်ချီလိုက်ရှာလေသည်။ ‘ ယက်ခ မင်းငါ့ရတနာတွေ … လမ်းက ဖြတ်လုတယ်ဆို ’ ‘ မ ဝံကြောင်းပါ … တော်ဖရားကြီး ဖရာ့ ’ ‘ ဟဲ့ .. ငါ့တပ်မှုး .. ဝဏ္ဏ ..ကို ခေါ် စမ်းဟေ့ ’ စပ်ခွန်ကြာက .. တဲအပြင်သို့ လှမ်းအော်လိုက် လေ သည်။
‘မှန်ပါ့ .. တပ်မှုးဝဏ္ဏ .. လောင်းလုံတောင်ကြား မစစ်ခင်ကပင် .. ပျောက်နေကြောင်း ကျွန်တော်မျိုးလျှောက် တင်ဝံ့ပါသည် ဖရာ့ ’ ‘ ဟဲ့ .. ငနေမျိုး .. ဒါဖြင့် ဒီကောင် ဝဏ္ဏ.. ဘယ်ရောက် သွားလဲဟ.. လိုက် ကြစမ်း ’ ‘ ဒေါက်… ဒေါက်.. ’ ‘ မောင်တော်လားဟင် ’ ‘ အင်း ’ ‘ ဂျောက်.. ဂျောက် .. ဂျလောက် .. လောက်ကျီ ’ ‘ ဟင်.. စိုင်းဝဏ္ဏ ’ ပြင်ပနှင်းထုအချီ.. ဟော်နန်းတံခါးမကြီးအတွင်း အတင်းတိုးဝင်လာကြသည်။ အဆာင်တော်သားနှစ်ဦးက စောမြတ်သန္တာကို ဓါးလွတ်ကိုယ်စီနှင့် ဝိုင်းရံ စောင့်ရှောက် နေကြသည်။
‘ စိုင်းဝဏ္ဏ .. မောင်တော် ဘုရားရောဟဲ့ ’ ‘ မှန်ပါ့ .. အတွင်းဆောင် ၌ တင်လျှောက် ခွင့် မပြုပါ ဖရာ့ ’ ‘ ကဲ… လာလာ .. မင်းတို့ ဒီမှာပဲ နေခဲ့ကြ ’ အစောင့်နှစ်ယောက်တို့ ခြံရံနေရာမှ ထားရစ်ခဲ့ပြီး စိုင်းဝဏ္ဏ ကိုခေါ်ကာ .. အတွင်းခန်းထဲသို့ ယုံကြည်စွာ ဝင်ခဲ့မိလေ သော စောမြတ်သန္တာ၏ မဟာအမှား .. အတွင်းဆောင် သလွန်ထက်ရောက်သည်နှင့် စိုင်းဝဏ္ဏ၏ သန်မာသော လက်မောင်းကြီးများ ဖြင့် ရစ်ပတ်သိမ်း ဖက်ခြင်းကို ခံလိုက်ရပြီး နှစ်ဦးသားလုံးထွေးကာ ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ ကျသွား လေရာ.. စောမြတ်သန္တာ ထမီလေး မှာ လျှော့ရဲသွား၏။
‘ အိုး … နင် ဘယ်လို လုပ်တာလဲ .. ဝဏ္ဏ ’ ‘ နင့်ကို .. လိုးချင်လို့ပါ သန္တာ ’ ‘ ဟယ်.. နင် မိုက်ရိုင်း လှချည်လား ဝဏ္ဏ ရယ် ’ မွှေးထုံ သင်းကြိုင်နေသော သန္တာပါးပြင်လေးကို တအားကြီးနမ်းပြစ်ရင်းက လက်များက.. သန္တာ့ နို့အုံလေးများကို ဆုပ်နယ်၏။ လက် တစ်ဖက်ကလည်း ပေါင်ကြားထဲသို့ နှိုက်ပြီး ခပ်ရွရွလေး ပွတ်သပ်နေရာ .. စောမြတ်သန္တာ မီးဖွားပြီးစ .. နုဖတ်နေသောေ-ာက် ပတ်လေး ကို တင်းတင်းစုစည်း လိမ်ကျစ်ထားလိုက် လေသည်။ ရုန်းရင်း ကန်ရင်း ဖြစ်လည်း .. ‘ ငါ .. ခလေး မွေးပြီးတာ မကြာ သေးဘူး ဝဏ္ဏ ရယ် မလုပ်ပါနဲ့.. ဟယ် .. တောင်းပန် ပါတယ်.. ’ ဟု တောင်းပန်ရှာပါတယ် .. သို့သော် ကာမဘီလူး ဝဏ္ဏကား နသိုး ကြိုးပြတ် .. ကြမ်းလေပြီ
‘ ငါ.. ချင်တာပဲ .. ငါသိတယ် .. သန္တာ .. နင်ကောင်းကောင်းမခံရင် .. ဒီမှာတွေ့ လား.. ဓါး ’ ဓါးသမားမို့ ဓါးအားကိုးဖြင့် အနိုင်ကျင့် လေသည်။ အေးမြသော ဆောင်းညချမ်းမှာ သန္တာချွေးသီး ချွေးပေါက်တွေ စို့လာနေသည်။ ငှက်ကြီးတောင်ဓါးက ..လည်မြိုပေါ် သို့ ကန့်လန့်ဖြတ် တင်ထားပြီး ဖိကပ်ထားလေသည်။ စောမြတ်သန္တာက ရုန်းကန်အားများ.. ကျဆင်းသွားပြီး.. ငြိမ်သက်သွားရလေ သည်။ ထိုအခါမှ.. ဝဏ္ဏက ကျေနပ်စွာပြုံးရင်း … သန္တာ့ထမီ ကို ဆွဲချွတ်ပြစ်လိုက် လေသည်။ နေမထိ.. လေမဟတ် မိဖရားလက် ကလေးလို အသားအရည်များက နူးအိပျော့ပျောင်းနေသည်။ မီးဖွားပြီးစ..သွေးသစ် လောင်းစမို့ အလှအားလုံး အသစ်..အသစ်များ ဖြင့် ပြည့်ဖြိုးဖောင်းကားနေသောေ-ာက်ဖုတ်လေးမှာ.. ခပ်ယောင်ယောင်လေး တင်းနေဆဲ ဖြစ်ပြီး .. စိလေးမှာ လက်သန်းတစ် ဖျားစာခန့် ပြူးထွက်နေသည်ကို ဝဏ္ဏက စူးစူးဝါးဝါး စိုက်ကြည့်ရင်း.. သူ့ပေါင်ကြားမှ – ကြီးမှာ………. တဒိန်းဒိန်း ထောင်ထလာ လေသည်။
သန္တာ့ မျက်နှာလေး.. နီရဲလျက် ..ဒေါသစိတ်ရှက်စိတ်တို့ဖြင့် ..နှုတ်ခမ်းလေးကို ..ပြတ်လုမတတ် ကိုက်ထားရင်း မျက်ရည်များ စီးကျ လာလေသည်။ စင်စစ် .. ဝဏ္ဏဟာ ငယ်မွေးခြံပေါက် မဟုတ်ခဲ့ အရှင်မွေး၍ နေ့ချင်းကြီးခဲ့ရသော.. သာမာန် သိုင်းသမားလေး ဘဝမှ .. ဟော်နမ်းသုံး သိုင်းဆရာ အဖြစ်သို့ စပ်ခွန်ကြာပို့ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ သန္တာ နှင့် ဝဏ္ဏမှာ သက်တူရွယ်တူ နှစ်ဆယ်ကျော်ကျော် လေးများ သာ ဖြစ်ကြ၍ သွေးဆူလွယ်သူများ ပီပီ အလိုမတူသည်.. တူသည်အပထား.. လိင်အင်္ဂါများ ထိတွေ့လိုက်သည့် နှင့် ပင် ..နွေးထွေးအိစက်ခြင်း အရသာ နှင့်ေ-ာက်ပတ်ဟူသော အသိတို့ ကြောင့် နှစ်ဦးသား၏ ရင်များဗလောင်စူအောင် မှိုင်းမိနေကြ သည်ကို သန္တာ သတိထားမိလေသည်။
သန္တာ့ ကိုယ်ခန်ဓာ ဖွဲ့စည်းပုံကလည်း တခြားမိန်းကလေး တွေထက်တော့ ထူးခြားနေသည်မှာ အမှန်ပင်..ေ-ာက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသား တခြမ်းဆီကပင် အလွန်တရာကြီးမားလှသည်.. မွေးဖွားပြီးစမို့ .. ယောင်နေသည်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ယင်းနှုတ်ခမ်းနှစ်ခြမ်း စေ့ ကပ်နေသော အနေအထားက မောက်ကြွား တင်းပြည့်ဖြိုးပြီး…… ဝဏ္ဏ၏ ကြီးထည့်စဉ်တွင် တင်းကြပ်စွာ စုပ်ယူထားသကဲ့ သို့ ကောင်းမွန်လှသည်။ သန္တာလေး၏ ဆီးခုံအထက်.. ဖြူဖွေးဖွေး နူးညံ့နေသော ဆီးခုံလေးကို ဝဏ္ဏက မက်မက် မောမောလေးဖြင့် လျှာနွေးနွေးကြီးနှင့် ယက်လိုက်လေသည်။ သန္တာ့ခါးလေး ကော့ပြီး အင်းကနဲ ဖြစ်ခါ.. ဇက်ကလေး စောင်းကျသွားသည် အထိ ခံစား လိုက်ရလေသည်။ လက်နှစ်ဖက်ကလည်း မရည်ရွယ်ပဲ.. ဝဏ္ဏဆံပင်များကို ဖွဖွလေး ကိုင်မိလိုက်ပြီး.. ပေါင်နှစ်ဖက်ကိုလဲ ကြာကြာ စေ့ကပ် မထားနိုင်တော့ပဲ ကားပေးလိုက်မိလေသည်။
ဝဏ္ဏက ကို အတင်းအကြပ်ထည့်ခြင်းကို မအောင်မြင်မှန်းသိ၍ ဓါးကိုကြမ်းပြင် ပေါ်သို့ ချလိုက်ပြီး.. ပေါင်အတွင်းသားနှစ်ဖက်ကို ..အတွင်းမှ ကန်ဖြဲလိုက်ပြီး လက်နှစ်ဖက်နှင့် ထောက်ထားလိုက်ခါ.. ပြဲအာလာသောေ-ာက်ဖုတ်လေးထိပ်မှ တကယ့်မိန်းပွိုင့်ေ-ာ က်စိလေးကို လျှာစောင်းလေးနှင့် ထိုးဆွပေးလိုက်သော အခါ၌ကား ..တင်းခံနိုင်သော စွမ်းအားများ သန္တာ့ကိုယ်တွင် ပျောက်လွင့် ကုန်တော့သည်။ ဆီးစပ်.. ပေါင်တွင်းသား.. စအိုမှ တကိုယ်လုံးအနှံ့အပြား ..သိမ့်သိမ့်ခါသော ကာမ ..ဆန္ဒများကို တဖွားဖွား လှုံ့ဆော်လာလေတော့သည်။
ဝဏ္ဏကလည်း သန္တာ တစ်ယောက် ခြေမလေးများ ကုတ်ကွေးပြီး အကြောလေးများ ထောင်ထလာသည်နှင့် .. သန္တာ့တစ်ကိုယ်လုံး အဝတ်ဆို၍ ဘာမှမကျန်အောင် ဆွဲချွတ်ပြစ်ခါ.. ဝိုင်းစက်ကြီးမားသော နို့ကြီးနှစ်လုံးကို အိအိ..တုံတုံဖြင့် ..လက်ဝါးကြီး အုပ်ကိုင်ပြီး ပွတ်သပ်ဆုပ်နယ်လျက် ..ေ-ာက်ရေလေများ စိုရွဲစ ပြုလာသောေ-ာက်ပတ်ကလေး ထဲသို့ ကြီးကို တေ့ပြီး သွင်းလိုက် လေ သည်။ ‘ ဗြစ်….. ဗြစ်….. ဗြစ် ’ ‘ သေ.. သေပါပြီ ဝဏ္ဏ ရယ်.. ဟင်း .. ဟင်း ’ သန္တာပြီးသွားအောင်ပဲ .. ဝဏ္ဏကြီးက ကြီးမားထွား ကြိုင်းလှသည်.. ထိပ်အဖျားဝိုင်းကပင်လျင် သာမာန်အချိန်၌ ကျပ်စေ့ဝိုင်းခန့်ရှိလေသည်။
ကာမအရှိန်တက်လာသော အချိန်မျိုး၌ ဝဏ္ဏကြီး လုံးပတ်သည် မြွေဟောက်တစ်ကောင်၏ ပြောင်လက်ခြင်းမျိုးဖြင့် အရောင်တ လက်လက် တောက်ခါ.. လက်တဆုပ် အံကျ လောက်အောင် ကြီးထွားလှလေသည်။ ကိုယ်ထည်ကြီးက ..နူးညံ့ဖြူဖွေးသောေ-ာ က်ပတ်နှုတ်ခမ်း သားများကို ခေါင်း အတွင်းသို့ ပွယ်ယူစုပြုံပြီး.. ဆွဲယူသွားသလို ခံစားလိုက်ရသဖြင့် .. သန္တာ့ ခမျာ.. ‘ သေပါပြီ.. ဝဏ္ဏ ရယ်. ’ ဟု ငြီးတွားလိုက် လေသည်။ အတန်ပတ်လည်တွင် ကြီးမားသော အကြောကြီးများကလည်း ဖုထစ်.. ထောင်ထလျှ က်.. အပြိုင်းပြိုင်းထနေပြန်ရာ ..ေ-ာက်ဖုတ်လေးထဲသို့ လိင်တံကြီး ထထစ်ခြင်း နစ်ဝင်သွားတိုင်းေ-ာက်စိလေးထိပ်ကို တစ် ချက်ပွတ်ပြီးမှ ဝင်သွားခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုအခါ .. သန္တာမှာ ထွန့်..ထွန့်..လူးကာ တစ်ကိုယ်လုံး ခါ..ခါသွားပြီး .. ‘ အင့် ’ ကနဲ ငြီးတွားလေတော့ သည်။ ဝဏ္ဏမှာ အားရပါးရ ကြီး ပွဲတော်တည်ရတော့ မည်ဆိုသောအခါ၌ ဘာကိုမှသတိမထား..ေ-ာက်ဖုတ်ကလေးကိုသာ.. အသာငမ်းငမ်းကြီးဖြဲကာ.. သူ့ အယ်စတုံကြီးကို အတင်းဖြဲထည့်ပြီး ..သွင်းနေတော့သည်။ သန္တာမှာ ဝဏ္ဏ မျက်နှာကို မကြည့်ရဲရှက်လွန်း၍ခေါင်းလေးစောင်းထား မိလေသည်။ တစ်ချက်တစ်ချက်မျက်နှာလေးရှုံ့မဲ့ပြီး ‘ ဟို့.. အိုး.. အင်း…… ကျွတ်…. ကျွတ် .. ’ ဟုသာ ငြီးတွားရှာသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ဝဏ္ဏကြီးက နူးအိဆဲရှိသေးသော သားအိမ်ခေါင်းကို .. ထိုးထောက်မိသောအခါမျိုး များတွင်ကား .. ဝဏ္ဏ ရင်ဘတ်ကြီး ကို ခပ်တင်းတင်းလေး ဆီးထွန်းထားရင်း..
‘ ဖြေးဖြေးလုပ်ပါ.. ဝဏ္ဏ ရယ်.. နာလွန်းလို့ပါ ’ ဟု သနားစဖွယ်လေး တောင်းပန်ရှာသည်။ ဖြူဖွေးသန့်ရှင်း လှသော သန္တာ ၏ တော်ဝင်ေ-ာက်ဖုတ်လေးကို ဝဏ္ဏကဲ့သို့သော ကြီး မဲမဲကြီးက ဒလကြမ်းထိုးဆောင့် နေသည်မှာ မတရားလွန်းရာကျသည် ။ ချော့ မြူ နူးဆွပြီး တော့ သန္တာ့ အဘို့ ခံနိုင်ရယ်ပိုလာနိုင် စေသည် မဟုတ်ပါလား .. ‘ ဗြစ် .. ဗြစ်….. ဗြစ်…. ဒုတ် ’ ‘ အား………. အမေလေး….. လေး ….. ကျွတ်…. ကျွတ် .. ’ ဝဏ္ဏ၏ ဆောင့်ချက်များက ပြင်းသည် သန္တာ့တင်ပါး ကြီးများ ဟော်နန်းကြမ်းပြင် ၌ တုန်ခါ လှုပ်ရှားနေသည်။ ဒူးနှစ်ချောင်းလဲ မိုးပေါ်ထောင်ခါ .. သွက်သွက် လက်လက်ကြီးကို လှုပ်ရှားနေတော့ရာ .. ဝဏ္ဏနှင့် သန္တာတို့ နှစ်ဦး၏ ပေါင်အတွင်းပိုင်း၌ ချွေးစေးလေးများပင် ပြန်လာလေတော့သည်။
ရုတ်တရက် မပြီး သန္တာ့နှုတ်ခမ်းနီရဲရဲလေးကို ငုံ့၍စုပ်ရန်ကြိုးပမ်းလိုက်သောအခါ .. သန္တာက .. ‘ နှုတ်ခမ်းတော့ မစုပ်ပါနဲ့ ’ ဟု လေသံလေးနှင့် ပြောရင်းကပင် ..အတင်းခေါင်းကိုလွှဲကာ ရှောင်တိမ်း ဖယ်ပြစ်သည်။ မလုပ်နဲ့ ဆိုတာကိုမှ လူဆိုတာက လုပ်ချင်ကြ သည်။ ‘ ဟင့် .. အင်း.. အင်း .. နှုတ်ခမ်း မစုပ် .. ပါနဲ့ ….. ဆို ’ ဝဏ္ဏက အတင်းအဓမ္မ လက်နှစ်ဖက်ကိုချုပ်ကိုင်ကာ နှုတ်ခမ်းလေး ကို စုပ်ယူပြီး .. သန္တာ့ပါးစပ် တွင်းသို့ သူ့ လျှာကြီးကို .. ထိုးသွင်းလိုက်လေသည်။ ‘ အင်း … ဟင်း … ဟင်း … ’ သန္တာ့ မျက်တောင် ကြီးများ ကွေးမှေးဆင်းသွား ကြလေသည်။
ပြီး.. ဝဏ္ဏ လည်ဂုတ်ကြီးကိုလဲ ယောင်ယောင် အမှားမှား ဖက်တွယ် လိုက်မိလေ တော့သည်။ ခါးလေးကိုလဲ တင်းကနဲ ပြန်လည်ကော့ပေးလိုက်မိခါ .. ဝင်လျက်ရှိသော ကြီးမှာ ‘ အိ ’ ကနဲ ပိုမို နစ်ဝင် သွားပြီး ကပ် ထားလျှက် သိမ့်ကနဲ သိမ့်ကနဲ .. ဝဏ္ဏက ဖင်ကြီးကို အသာလေး မြှောက်ပြီး ဖိပေးလိုက်လေရာ သန္တာ၏ ခြေနှစ်ချောင်းသည် ဝဏ္ဏ ခါးကို ကပ်ကျေးကဲ့သို့ နှစ်ဖက်ညှပ်ထားလိုက်လေသည်။ ‘ အင့် .. အင့် … အင့် ….. အင့် …. ဟီး .. ဟီး .. ကျွတ် ’
‘ ပြွတ် .. ပြွတ် .. ပြွတ် .. ဗရီ .. ဗြွတ် ဗြွတ် .. ဗရိ ’ေ-ာက်မွှေး နှင့် မွှေးတို့က ရေတရွှဲရွှဲဖြင့် ဖိကြပ်သံလေး နှင့် အဝင်အထွက် .. အပြဲ အစိအသံများ တိုင်ပင်ကိုက် .. နာရီ မှန်မှန်လေး ထွက်ပေါ်နေပြီး .. နှစ်ယောက်သား တအားလိမ်ကျစ် .. တအားတွန့်ပြီး .. ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဖက်ခါ ဟောနန်းကြမ်းပြင် ၌လိမ့်နေကြတော့သည်။ ‘ ဆရာ ဝဏ္ဏ ’ တပည့်ကျော် စောပြည့် အခန်းတွင်းသို့ ဝင်ချလာသည်။ အရေးတကြီး အော်ပြောလိုက်လေသည်။ ဝဏ္ဏကိုယ်ခန်ဓာကြီး တွန့်သွားကာ .. သန္တာ့ ကိုယ်ပေါ်မှ ခွာလိုက် လေ သည်။‘ ဗြွတ် ’ ခနဲ – ကြီးက လျောထွက်လာပြီး တန်းတန်းကြီး ခါရမ်းနေသည်ကို စောပြည့်တွေ့လိုက် ရသည်။ ကြောက်စရာ .. အဓိပတိကြီးပါတကားဟု စောပြည့်စိတ်ထဲ၌ တိတ်တခိုးလေး ရေရွတ်မိသည်။
အလားတူသန္တာ၏ေ-ာက်ဖုတ် လေးမှာလည်း အရှိန်တက်နေစဉ်ကြီးက ရုတ်တရက် ထွက်သွား၍ ကြပ်ကြပ်တင်းတင်းကြီး ခံစားနေရာမှ ကားကနဲ ဖြစ်သွားပြီး အဝလေးမှာ ကျပ် စေ့ဝိုင်းခန့် ဟောင်းလောင်းလေး ဖြစ်နေပြီးေ-ာက်ခေါင်းထဲ သို့ပင် ထန်းကနဲ မြင်ရလောက်အောင် .. ဟင်းလင်းပွင့် သွားရှာသည်။ ပြီးမှ … တချက်ရှုံ့ကနဲဖြစ်ပြီး ပြန်ပိတ်သွားသည်။ သန္တာေ-ာက်ပတ်အောက် အကွဲကြောင်း လေးတွင် ဝဏ္ဏ၏ သုတ်ရည်အခဲလိုက် .. အခဲလိုက် ပုံကျနေသည်ထို့ အပြင်ေ-ာက်ခေါင်း ထဲမှ .. ဖရု.. ကနဲ စိမ့်ကျယိုစီးကျနေ သည်ကို စောပြည့် အစအဆုံး တွေ့လိုက်ရလေသည်။
‘ ငါ .. သန္တာ့ကို လက်လွတ်မခံနိုင်ဘူး .. စောပြည့် ’ ‘ မှန်ပါ့ .. ဖရာ့ ’ ‘ မင်းစောင့်နေ .. ငါ ထွက်တိုက် မယ် ’ ဝဏ္ဏ ပြောပြောဆိုဆို နှင့် ဓါးကောက်ယူသည်။ ‘ ဝဏ္ဏ ….. ဝဏ္ဏ ..’ သန္တာက လူးလဲထပြီး ခေါ်သည်။ ဝဏ္ဏက ဆတ်ကနဲ လှည့်ကြည့်သည်။ ခေါင်းလေးကို ခါရမ်း ပြနေလေသည်။ ဝဏ္ဏ .. သန္တာ့ အနားသို့ ပြန်လျောက်သွားပြီး .. သန္တာ့ပါးမို့မို့လေးကို ဖိနှစ်ပြီး နမ်းလိုက်ခါ ‘ သန္တာ့ကို … လက်မလွတ်နိုင်တော့ဘူးကွယ် ’ ‘ အကုန် ဒုက်ခ ရောက်ကုန်လိမ့်မယ် .. ဝဏ္ဏ .. ရယ် ’ ‘ စိတ်ချပါ.. သန္တာ ကိုယ်သန္တာ့ဆီကို .. ပြန်လာမှာပါ .. ’
ပုဆိုးကို တင်းနေအောင် ခါးတောင်းကြိုက်ပြီး သိုင်းအကျော်အမော် .. ဝဏ္ဏတစ်ယောက်.. လွှားခနဲ ခုန်ထွက် သွားလေတော့သည် ။ သန္တာ .. သိပ်မရင်းနှီးလှသော စောပြည့် ကို တစ်ချက်မျှ ကြည့်ပြီး အဝတ်များကို ကောက်ဝတ်ခါ နို့စို့ခလေး အိပ်နေသော သလွန်ဆီ သို့ လျောက်သွားလေသည်။ စောပြည့်က လေသာပြတင်းမှ အပြင်သို့ အခြေအနေကိုလေ့လာနေရင်း သန္တာ့ကို အမှတ်မဲ့ လှမ်း ကြည့်မိသည်။ ခလေးကို သလွန်ပေါ်၌ ငုံ့ကြည့်ရင်း ကုန်းထားသော တင်ပါးကြီးများမှာ သရေယိုချင်စရာကြီး လှပဝိုင်းစက်ပြီး ချင် စရာ အိအိထွားထွားကြီးတင်းနေသည်။ စောပြည့်.. သန္တာ့အနားသို့..ရောက်သွားပြီး သန္တာ့ တင်ပါးကြီးကို.. ခပ်ဖွဖွလေး ပွတ်လိုက် သည်။
‘ ဟင် …. ရှင် ……. ရှင် ’ သန္တာ ဆက်ကနဲ လှည့်အော်သော်လည်း သန်မာသော စောပြည့်က ကျွမ်းကျင်စွာ ဂုတ်ကို စီးချုပ်လိုက်ပြီး ကုန်းလျက်သားအနေအထားမှ .. ထမီကို ဆွဲချွတ်လိုက် ပြီး မကြာခင်လေး ကမှ အခံခဲ့ရသောေ-ာက်ပတ်ကလေးက ဖင်နှစ်ဖက် ကြားမှ တင်းတင်းစေ့စေ့လေး ပြူးပြီး ကုန်းထွက်နေသည်ကို ခြောက်ခြားစဖွယ် တွေ့သိရပါလေသည်။ စောပြည့် ရင်ထဲ .. ကာမ အပူရှိန်များ .. ဝုန်းကနဲ ထလာသည် ။ စောပြည့်သည် ဝဏ္ဏ၏ တပည့်တစ်ဦးဖြစ်သလို ကာယဗလမှာလဲ .. အာဌာဝက ဘီးလူးကြီး အလား ကြီးမား ထွားကြိုင်းကာ မဲနက်သော အသားများက .. ဆီလူးထားသလိုပင် ပြောင်တင်းနေသည်။ လက်ဖျံနှင့် ရင်ဘတ်တို့ ၌ အမွှေးကြမ်းကြီးများ ထူပိန်းစွာ ပေါက်နေပြီး .. နှုတ်ခမ်းမွှေး ထူထူကြီးနှစ်ဖက်ကလည်း မဲမှောင်သန်စွမ်းလှပေသည်။
‘ ငြိမ်ငြိမ်နေပါ.. သခင်မလေး.. ကျုပ်အလို မလိုက်ရင် ခုအချိန်မှာ.. သခင်မလေး .. သေသွားမှာပါ.. ဟဲဟဲ ’ သန္တာ မိမိကံကြမ္မာကို ညိုးငယ်ဝမ်းနည်းစွာ ငိုချလိုက်ရုံမှ တပါး ဘာမှ မတတ်နိုင်တော့ .. ထိုအခိုက် ခလေးက ဝါးကနဲ ငိုချလိုက်ရာ ကုန်းလျက်သား နို့တိုက်ပေးနေလေရာ .. စောပြည့် အဖို့ ဆန္ဒပြည့်ဝစွာ .. ဆောင့်နိုင်တော့သည်။ ‘ ခလေး.. နိ့တိုက်နေတယ်ဟာ .. ဖြေးဖြေးလုပ်ပါ ’ သန္တာက စေတနာမပါစွာ အငေါ်ထူးထူးနှင့်ပင် ပြောလိုက်မိလေသည်။ စောပြည့်ကတော့ သန္တာ့ခါးလေးကို စုံကိုင်ပြီး ..မဲမဲကြီးကို အတင်းထဲ့နေလေတော့သည်။ တကယ်တော့ စောပြည့်ဆိုသည့် ကောင်ကလည်း ပွဲလန့်တုန်း ဖျာခင်းလိုက်ခြင်းသာဖြစ်ပြီး နေမ ထိ.. လေမထိ.. လိုးလိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်ပေသည်။
သစ္စာဟူသော အသိဉာဏ် ပညာ တို့ သည် စောပြည့်ကိုယ်ခန်ဓာမှ ဖယ်ခွာသွားကြပြီးဖြစ်သည်။ အပြစ်တင်စော၍ တလောကလုံး က မုန်းကြစေဦးတော့ စောပြည့်ကတော့ မမူပြီ .. အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ဝါဂွမ်းထက်ပင်နူးညံ့အိနေသော စောမြတ်သန္တာကဲ့သို့ေ-ာက်ဖုတ်မျိုးကို ဘယ်အရာမှအရသာ မမှီနိုင်။ စေ့ကပ်နေသောေ-ာက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးများက ခပ်တင်းတင်းလေး လိင် တံကို ညှစ်ထားလိုက်သည်။ေ-ာက်ခေါင်းထဲသို့ ဒစ်ကြီးဝင်ပြီး .. ရပ်နားချိန်၌ အတွင်းပိုင်း ခေါင်းလှုပ်ရှားမှု လေးမှာ သိသိသာသာ ကြီး ထိပ်ကို ပြုစုပွတ်သပ်ပေး တတ်ကြသည်။ အပြင်ဘမ်းလှုပ် ရှားထိတွေ့မှုက အခြားေ-ာက်ဖုတ်များထက် အဆတရာတောင် မက သာလွန်သော အချက်ပင် ဖြစ်သည်ဟု စောပြည့်မှတ်ချက် ချလိုက်လေသည်။
ယခုလည်း .. ကြည့် .. အုံလိုက် ထွေးလိုက် ထကြွတက်နေသော သွေးတို့နှင့် ရောပြွန်းပြီး နှုတ်ခမ်းသားလေး များမှာ ပြောင်တင်း နေကြ ခြင်းဖြစ်ကာ ကာမဆန္ဒကို နှိုးဆွကြသည်။ေ-ာက်မွှေး .. လေးများက.. ထူလဗြစ်ကြီးမဟုတ်ပဲ နူးနူးညံ့ညံ့ပါးပါးလွှာလွှာ လေးမို့ေ-ာက်ဖုတ်အလှက ပိုမို -ချင်စရာ ဖြစ်နေရသည်။ စောပြည့်၏ ပြောင်းတင်းမာတောင်နေသော ကြီး တဖြေးဖြေးချင်း ဝင် သွားသည်။
‘ ဗြစ် ….. ဗြစ်….. ဗြစ် .’ ‘ အို့ .. . အင်း .. . ကျွတ် . . . ကျွတ် .. . အင့် .. . ဟင့် ’ သန္တာ့ခမျာ အံကြိတ်မျက်စိမှိတ်ပြီး .. ခလေးကို နို့တိုက်နေသည်မို့ အားတင်းခံလိုက်ရရှာလေသည်။ သည်အထဲ .. ပေါင်ရင်းနှစ်ဖက် စလုံးက ပြည့်ကြပ်ကြီးမားသော ကြီးကေ-ာ က်ဖုတ်ထဲ ဝင်လိုက် သည်နှင့် အလွန်တရာ နာကျင်သောဝေဒနာကိုပါ ခံစားလိုက်ရသောကြောင့် ပေါင်နှစ်ဖက်ကို ထပ်မံကား ပေးလိုက်ရပြန်ပါသည်။ စောပြည့်ကမူ .. သေးကျဉ်သော ခါးလေးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် စုံကိုင်ဆွဲယူပြီး .. ဖြေးဖြေးချင်း စောင့်သွင်း နေရင်း နှင့်ေ-ာက်ဖုတ်အဝင်အထွက်ကို မမှိတ်မသုန်ကြည့်ကာ အရသာ ခံစားနေလိုက်လေသည်။
‘ စောပြည့်ရယ် .. မြန်မြန်လုပ်ပါ .. ညောင်းလို့ပါ ’ အော် .. တချိန်က .. ဟော်နန်းကြီး၏ မိဖုရား .. တော်ဘုရားကြီးပြီးလျှင် .. အာဏာအရှိ ဆုံး မိန်းကလေး .. အခုတော့ .. တစ်ချောင်းေ-ာက်ဖုတ်ထဲ သို့ ကန့်လန့်နေသလို မလူးသာ မလှုပ်သာ .. ဒါပါပဲ .. မာနကြီးလှချီရဲ့ ဆိုကာ မရွှေချောတွေေ-ာက်ဖုတ်ထဲသို့ ဝင်သွားတဲ့ အချိန်မှာ မာန.. တွေအားတွေ .. ပျောက်ကွယ်ကြရတာ ဓမ္မတာပါ .. ‘ ဟင်း .. .. ဟင်း .. ဒါတောင် တချို့မိန်းကလေးတွေက လူအကြောင်း စာဖွဲ့ပြီး .. ချင်း တူတာတောင် မှ ဆရာဝန် .. သင်္ဘောသား ခွဲခြားနေကြလေတယ်.. ’ အခု စောပြည့်ကြီးက ဘာမှ မဟုတ်တဲ့ကောင်ပါပဲ .. ဘာဖြစ်လဲ ..ဟင်း ဟင်း ..မိဖုရား လည်း – နဲ့ တွေ့တော့ ‘ ကျွတ် ’ တာပဲ မို့လား။ စောပြည့် အတွေးလေးနှင့် တစိမ့်စိမ့် အရသာခံရင်း နေစဉ် ဝဏ္ဏသွေးရူးသွေးတန်း နှင့် ပြေးဝင်လာသည်။
‘ ဟိတ်ကောင် .. စောပြည့် .. .. သစ္စာဖောက် ’ ပါးစပ်ကလဲ အော် .. လက်ကလဲ ဓါးနှင့်ဝင်ပိုင်းရာ သွေးနုသားနု .. သန္တာမှာလဲ ကြောက်လန့် တကြား ရုန်းကန်ထွက်ပြေး.. အခြေအနေတွေက ဝရုန်းသုန်းကား ဖြစ်ကုန်ပြီး ရှုပ်ထွေးနေချိန် ………….. စပ်ခွန်ကြာ နှင့် အိပ်ဆောင်တော် သားများအတွင်း ဆောင်သို့ ဓါးလွတ်ကိုယ်စီ နှင့် ဝဏ္ဏနောက် သို့ ဒလကြမ်း လိုက် လာကြသည်။ ကာမနွံ၌ နစ်နေသော စောပြည့် အခုနလေး တင် ကမှ စိတ်ကူးတွေ အယဉ်ကြီး ယဉ်ခဲ့သော စောပြည့် .. တန်းလန်းနှင့် ကြမ်းပြင်၌ သေဆုံး သွားရပြီ ။ သွေးစွန်းသော ဓါးကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ကိုင်ထားသော ဝဏ္ဏက သန္တာ့ နောက်သို့ ပြေးလိုက် ပြန်သည်။
‘ နင့်ကို အရှင်မထားခဲ့ဘူး.. မိသန္တာ .. သေပေတော့ ’ ‘ ဝဏ္ဏ .. . ဝဏ္ဏ ’ စပ်ခွန်ကြာ ငယ်သံပါအောင် ခေါ်၏ ။ ‘ အား ’ စူးရှ နက်ရှိုင်းသော သန္တာ့ အော်သံလေးသည် ဟော်နန်းကြီးတစ်ခုလုံး ကို အစိပ်စိပ် အမွှာမွှာ ဖြိုခွဲလိုက်သော ဗုံဆံတစ်လုံး ထိမှန် ပေါက်ကွဲ လိုက်သည်နှယ် စပ်ခွန်ကြာနား၌ အူထွက်သွားရသည်။ သန္တာ ….. သွေးအလူးလူးဖြင့် …လဲကျသေဆုံးသွားသည်။ ဝဏ္ဏ ထွက်ပြေးရင် အားယူလိုက်စဉ် စပ်ခွန်ကြာက ဌက်ကြီးတောင် ဓါးကို လှံသဖွယ်ပြောင်းကိုင် လိုက်ပြီး ပစ်လွတ်လိုက် လေသည်။
‘ အား …’ ဝဏ္ဏ .. လသာ ပြူတင်းမှ ဇောက်ထိုး မိုးမျှော်ကျသွားလေ တော့သည်။ အသက်မဲ့နေသည့်တိုင် အလှ မပျက်ရှာသော ဘဝပျက်မလေး သန္တာ့အလောင်းကို စပ်ခွန်ကြာပိုက်ထားရင်း .. သမီးငယ်နီတာရဲလေး အော်သံက နားသို့ ဝင်ရောက်လာမှ သတိထားမိရှာ၏။ ဤသည်မှာ … ကျော်ကျော် သိသော .. စပ်ခွန်ကြာတို့ သားအဖ၏ ဘဝဖြစ်စဉ် .. အတိတ်မဲ ကြီးဟု ဆိုနိုင်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်မှန်းမသိ.. လူကြီးများပြောနေကြစဉ်.. ကျော်ကျော်သည် စောမြသူဇာကို အလွန်ဂရုနာသက်မိ စွဲလန်းခဲ့ရ လေ သည်။ စောမြသူဇာကလည်း ကျော်ကျော့်အားငယ်သူငယ်ချင်းအနေဖြင့် လိုက်လျောစွာ အရေးတယူ ဆက်ဆံရှာပေသည်။
အော်.. .. ချစ်ရတဲ့ …. သူဇာရယ် …. အခုလဲ .. ဒီ .. မြသဲစံအိမ်ကြီးစီ .. သွားချင်ပြန် သတဲ့ .. ‘ ကိုကို ’ ‘ ပြောလေ .. ခလေး ’ ‘ ဒီ လို.. တိတ်တိတ်ပုန်း .. ချစ်မနေချင်တော့ဘူး ကိုကိုရာ’ ခွန်ပိုင်၏ရင်ခွင်ကြီးပေါ်တွင် မှောက်အိပ်လိုက်ရှာလေသည်။ ခွန်ပိုင်က.. ထွေးထွေးအိအိ.. ကိုယ်လုံးလေးကို .. အသာအယာ လေးပွတ်သပ်ချော့မြူရင်းက .. ပွေ့လိုက်သည်။ ဝစ်လစ်စလစ်ကလေး လှချင်တိုင်း လှနေသော နန်းအိဝါကိုယ်လုံးလေးက ခွန်ပိုင်၏မို့မောက်ထွားကြိုင်းသော ရင်ခွင်ကြီးထဲ၌ နစ်ဝင်ပြားကပ်သွားသည်။
‘ ကြည့်ပါလား .. အရမ်းညှစ်ထားတာ အသက်ရှူလို့ မဝတော့ဘူး .. ဟွန်း .. သူဒါပဲ .. ဟင်း ’ နန်းအိဝါ .. ပြုံးနွဲ့နွဲ့ပြောရင်း ခွန်ပိုင့် ပေါင်ကြားမှ ခပ်ပျော့ပျော့ခွေခွေကြီး ဖြစ်နေသော လိင်တံကြီးကို ကိုင်ကာ ‘ ဒါပဲ ’ ဟု လှုပ်ရမ်းရင်း ပြောကာ .. တခစ်ခစ်ရယ်နေ လိုက်သည်။ ခွန်ပိုင်က .. ပုခုံးလေး နှစ်ဖက်ကို အသာဆွဲမပြီး နန်းအိဝါ .. ခေါင်းလေးအား သူ့ပေါင်ကြားသို့ ဖိချလိုက်လေသည်။ ‘ ဟင့်အင်း.. ကိုကိုရာ .. ဟင့်အင်း ကွာ ’ နန်းအိဝါ .. မျက်နှာလေး လွဲလိုက်သောကြောင့် ပူနွေးသောဒစ်ကြီးက နန်းအိဝါ.. ပါးမို့မို့ လေးကို ထောက်မိလျက်သား ဖြစ်သွားသည်။
‘ ကိုကို.. ကို့ ချစ်တယ်ဆို .. ခလေးရဲ့ ’ ‘ အာ.. ချစ်တာ .. ချစ်တာပဲ .. ကြီးတော့ မစုတ်ချင်ပါဘူး..’ ‘ ကိုကိုကလဲ .. ခလေးေ-ာက် ဖုတ်ကလေးကို ယက်ပေးမယ်လေ.. ’ ‘ ဟင့်အင်း .. ဟင့်အင်း .. တော်ပီ .. ညစ်ပတ်.. မလုပ်နဲ့ကွာ.. ’ နန်းအိဝါ ခေါင်းမာနေသဖြင့် ခွန်ပိုင်က .. နန်းအိဝါ အားကုတင်ပေါ် သို့ အသာပက်လက် လှန်ချလိုက်ပြီး ပေါင်လေးနှစ်ချောင်းကို စုံကိုင်ဖြဲကာ ..ေ-ာက်ဖုတ်ဖြူ ဖြူလေးကို လျှာနွေးကြီး ဖြင့် ‘ ဗလပ် ’ ကနဲယက်လိုက်လေသည်။
‘ ဟေ့.. .. ကိုကိုကလဲ . . . လုပ်ပြီ .. . အား .. ယား တယ် .. ဆိုမှ .. ’ နန်းအိဝါ ဖင်လေး လိမ်ကျစ် လိမ်ကျစ် လုပ်ခါ ရုန်းကန်နေရှာ သော်လည်း ခွန်ပိုင်က .. သူ့လျာကြီး ဖြင့် အစွမ်းကုန် ယက်နေလေရာ .. နန်းအိဝါလေး မျက်နှာမှာ ရှက်စိတ်.. ယားယံ စိတ်ဖြင့် နီနီရဲ နေပြီး .. မျက်ရည်များထွက်အောင် .. တခစ်ခစ် ရယ်နေလိုက် လေသည်။ ဖင်လေးမှာလဲ ဆတ်ကနဲ့ .. အောက်သို့ တွန့်ဝင်လိုက် အပေါ်သို့ ရုတ်တရက် ခုန်းထလိုက်ဖြင့် .. ဆတ်ဆတ်ခါနေ လေတော့သည်။
‘ ပြွတ် .. ပလပ် .. အင်း .. အင်း ပြွတ်.. ဗြစ်.. ’ နန်းအိဝါ၏ ပြူးထွက်နေသောေ-ာက်စိလေးကို အသာလေး လက်ညှိုးလက်မ ဖြင့် ညှပ်ဆွဲပြီး လျာထိပ်ဖြင့် ကလိလိုက်သောအခါ.. .. ‘ အမယ်လေး ..ကိုကိုရာ ..ဟင်းဟင်း ..ဘယ်လိုကြီးမှန်းလဲ မသိပါဘူး ..တော် ပါတော့ .. အဟင့် ..ဟင့် ..’ ‘ ပြွတ်.. ပြွတ် ….. ဗြစ် .. ဗြစ် .. ပြွတ်.. ’ ‘ ကိုကို .. ကြည့်ပါလား .. စိတ်ညစ် လိုက်တာကွာ .. ’ နန်းအိ ဝါ.. ဆံပင်လေးများ ပြန့်ကျဲပြေကျနေကြသည်။ နို့နှစ်လုံးက တုတ်တုတ်ခဲခဲကြီး ခါရမ်းနေသည်။ အစွမ်းကုန်ဆွဲပြီးဖြဲထားသောေ-ာက်ဖုတ်ကလေး အတွင်းသားများကိုပင် အတိုင်းသား မြင်နေကြရလေသည်။
‘ ယား .. .. ယားတယ် .. .. ဟိဟိ .. .. … အာဟာ ဟာ .. ယားတယ် .. ကိုကို’ တတွတ်တွတ်တပြစ်တောက်တောက် ပြောရင်းလူးလွန့် လှုပ်ရှားနေသော နန်းအိဝါအသံလေးက .. မြသဲစံအိမ် အပေါ်ထပ် ညာဘက်အစွန်းဆုံး အခန်းထဲတွင် .. တိတ်ဆိတ်မှု့ ကို တိုးညှင်း စွာ ပျံ့လွင့် နေလေတော့သည်။ ဖေဖေက .. နန်းအိဝါ ကို တစ်ဦးတည်းသော သမီးမို့ အသက်မက ချစ်ပြီး အလိုလိုက်ခဲ့သည်။ မြသဲ စံအိမ် မှာ ဖေဖေ ဦးစိုင်းလုံ၏ သခင် .. ဘဘစပ်ခွန်ကြာ၏ ဟော်နန်း အဟောင်းကြီး ဖြစ်သော်လည်း နန်းအိဝါတို့ သားအဖက မပြတ်သုတ်သင် ရှင်းလင်း ထား၍ သန့်ရှင်းနေခဲ့သည်။
စောခွန်ပိုင်က လှေတစ်စင်းနှင့် ငါးမျှားလာရင်း ဒီအိမ်ကြီးသို့ ရောက်ခဲ့ပြီး .. နန်းအိဝါ နှင့် ချစ်သူ ဖြစ်ခဲ့ကြ၏။ အချစ် .. ဆိုသည်ကို .. အရသာ မှ မမြည်းစမ်းတတ်သေးမှီ အရသာ ကိုနန်းအိဝါ .. စွဲလန်း တက်မက်ခဲ့ရသည်။ ကိုကို မလာလျှင် .. မိမိေ-ာက်ဖုတ် ကလေးက ပိုခံချင် နေသည်။ ကိုကိုလာပြန်တော့လဲ ခံလို့ကို မဝနိုင်အောင် ဖြစ်ခဲ့ပြီး .. မိမိကပင် .. အမျိုးမျိုး .. တက်ခဲ့မိသည် အထိ ကိုကို့ အပေါ်၌ အချစ်ပိုခဲ့ရသည်.. နန်းအိဝါ .. ရယ်ပါ။ အမှန်တစ်ကယ်လည်း .. စောခွန်ပိုင် သည် မကျမ်း ကျေသူဖြစ်သည်။ နန်းအိဝါ၏ လုံးဝန်း ကျစ်လျစ်သော နို့ကြီးများကို ခပ်ရွရွလေး ပွတ်ပေးရင်း လက်ညှိုးလက်မလေးဖြင့် နို့သီးခေါင်း လေးကို ..ညှပ် ယူဆွဲပွတ်လိုက် ခြင်းများက ခံချင် စိတ်ကို ထိပ်ရောက်စေလေသည်။
တဖန် နှုတ်ခမ်းလေးများကို ငုံခဲ ထားရင်း ..လျာဖြင့်ကလိပေးသော နှုတ်ခမ်းစုပ်ခြင်း အတတ်ပညာကိုလည်း စောခွန်ပိုင်က ကျွမ်းကျင်လွန်း လေရာ .. သုတ်ရေများပင် ထိမ်းမထားနိုင်တော့ပဲ ပန်းထုတ်မိသည် အထိခံ၍ ကောင်းလွန်း ပါသည်။ မည်သို့ပင် ဖြစ်စေ .. မြသဲစံအိမ်၌ စောခွန်ပိုင် နှင့် နန်းအိဝါတို့ တိတ်တဆိတ် ပွဲ လေးများ ကျင့်ပခဲ့ကြသည်။ နန်းအိဝါကလည်း ဖခင်ဦးစိုင်းလုံ မသိအောင် .. စောခွန်ပိုင်ထံ အမြဲလိုလို အခံလာနေကြပင် ဖြစ်သည်။ ဤဒစ်ကြီးဖြင့် နန်းအိဝါသားအိမ်လေးကို ဆောင့်လိုက် လေတိုင်း နန်းအိဝါမှာ.. ကော့..ကော့ပြီး .. တွန့်သွားလောက်အောင် ကောင်းလွန်းလှပါသည်။ အဝတ်မဲ့ ခွန်ပိုင်ကျောပြင်ကြီးကို တ ရွရွပွတ်သပ်ရင်း ဖြင့် နန်းအိဝါ မှေးပြီးခံနေရသည်။
အရသာမှာ အလွန်တရာ ရာနှုံးပြည့် ကောင်းသောန ည်း ..တစ်ရပ် ဖြစ်သည်။ ယခုလည်း နန်းအိဝါေ-ာက်ခေါင်းထဲသို့ ထထိမိမိ ကြီး လျာစောင်းထိုးသွင်းပြီး ..ယက်ပေးနေသော ခေါင်းကို နန်းအိဝါ လက်အစုံဖြင့် ထိမ်းကိုင်ရင်း ပေါင်နှစ်လုံးကို အစွမ်းကုန်ဖြဲ ပေး ထားရင်း ခြေနှစ်ချောင်းမှာ လေထဲ၌ တွယ်ရာမဲ့လှုပ်ရမ်းနေမိရှာလေသည်။ ‘ ခလေး .. ရယ် ’ ‘ ဘာလဲ .. ကိုကိုရယ် .. အရမ်းဆိုး တာပဲ.. . မောလိုက်တာ .. ’ ‘ ကိုကို့ .. ကို စုပ်ပေးပါလားဟင် ..’ ‘ ဟင့်အင်း .. နန်းအိ .. ရှက်တယ် .. ’ ‘ နန်းအိကလဲကွာ.. ခုထိ ရှက်နေတုံးလား ..’ ‘ ရှက်တာပေါ့လို့ .. စုပ် ရမှာကိုး .. ’
ခွန်ပိုင်က နန်းအိဝါ ကိုယ်လုံးလေးကို ယုယုယယလေး သိမ်းဖက်ရင်း .. နေရာအနှံ့နမ်းလိုက် ရင်းမှ နန်းအိဝါ ပါးစပ်နားသို့ သူ့ကြီးကို တေ့ပေးလိုက်လေသည်။ နန်းအိဝါက .. ‘ ဟင့် ’ ကနဲ့ မျက်စောင်းလေး ထိုးပြီး မရဲတရဲလေးဖြင့် ဒစ်ကြီးကိုငုံခဲပြီး လျာလေးဖြင့် ကလိပေးနေလေပြီ .. မကြာခဏ -ကြီး တစ်ချောင်း လုံးက လည်မြို ရောက် သည် အထိ စုပ်သွင်းလိုက် မှုတ်လိုက်ဖြင့် ..စုပ်ခြင်း သင်္ခန်းစာ ကို လက်တွေ့ကျကျ လုပ်နေလေတော့သည်။
ခွန်ပိုင်ကလည်း အရသာရှိရှိဖြင့် နန်းအိဝါ ခေါင်းလေးကို ထိန်းကိုင်ပြီး အားရပါးရ ဆောင့်လိုက်သောအခါ ထိပ်ကြီးက အဆုံးဝင် သွားသဖြင့် နန်းအိဝါခမျာ .. မျက်လုံးလေးများ ပင်ပြူးသွားပြီး ကမန်းကတန်း ကြီးကို ဆွဲချွတ်လိုက်သည်။ ‘ ကိုကိုကလဲ .. .. . အရမ်းပဲ .. .. . ဘာမှန်းလဲ မသိဘူး .. ’ ‘ တော်ပီကွာ.. မစုပ်ပေးတော့ ဘူး . . ’ နန်းအိဝါ စိတ်ကောက်ဟန်လေးဖြင့် မျက်နှာလွဲပြီး တဖက်သို့လှည့်သွားလေသည်။ ခွန်ပိုင်က အသာအယာ ဆွဲယူ ပွေ့ဖက်ပြီး ဖင်လေးကို မိုးပေါ်ထောင်ယူပြီး ပြူးထွက်နေသောေ-ာ က် ဖုတ်လေးထဲသို့ ကြီးမားပြီး ပြောင်လက်နေသော ကြီးအား အသာတေ့ကာ ထောင်ပြီး ဖိချသွင်းလိုက်လေသည်။
‘ အီး .. ဟီး .. ဟီး .. နာတယ် .. ကိုကိုရဲ့ .. အင့် အင့် .. ’ ‘ ဖင်ပိုပြီး မြှောက်ထားလေ .. ’ နန်းအိဝါက .. သပ်လျှိုလိုက်သလို ဝင်လာ သော -ကြီးအားေ-ာက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသား နှစ်ဖက်ဖြင့် ညှစ်ထားလိုက်သည်။ ‘ ဖြေးဖြေး .. လိုးပါ .. ကိုကိုရယ် .. ’ ‘ အေးပါ .. ခ လေးရယ်.. မနာစေရပါဘူး .. ’ ခွန်ပိုင်က .. ပါးစပ်က သာ မနာပါဘူးဟု ပြောနေသော်လည်း ဆောင့်နေခြင်းက ရပ်မသွား ကြီးပြန် ထုတ်လိုက်တိုင်း..ေ-ာက်ဖုတ်လေးမှာ အပြင်သို့ သုံးလက်မနီးနီး ..ခပ်စူစူလေး ပါလာတတ်လေသည်။ ထိုအခါမျိုးတွင်ေ-ာက် ဖုတ်လေး၏ အတွင်းသား ရဲရဲလေးများမှာ ရဲကနဲ ပါလာကြသည်။
အတန်ငယ်ဆောင့်ပြီး .. နို့ကြီးနှစ်လုံးကို အောက်မှ လက်လျှိုနှိုက်ပြီး .. အားရပါးရ သုံးလေးချက်မျှ ဆောင့်ချလိုက်လေတော့သည်။ ‘ အင်း.. အင်း .. ကောင်းလိုက်တာ .. ကိုကိုရယ် .. ’ လေးဘက်ကလေးထောက်ရင်း ..မျက်လုံးလေးမှေးကာ နန်းအိဝါ ငြီးငြီးငြူငြူ လေးပြောရင်းေ-ာက်ခေါင်း အတွင်းမှေ-ာက်ရည်များကို ပန်းထုတ်လိုက်မိလေတော့သည်။ ခွန်ပိုင်မှာလဲ .. အရေများ ရွှဲရွှဲစိုလာ သော နန်းအိဝါေ-ာက်ဖုတ်လေးကို .. အသံကျယ်ကြီး များပြည့် အောင် ဆောင့်ပြီး .. သူ၏ ဆီးစပ်နှင့် နန်းအိဝါ ဖင်ဖြူဖြူလေးကို တအားကြီး ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆွဲဆောင့်လိုက်ပြီးေ-ာက်ခေါင်းလေးထဲသို့ သုတ်ရည်များကို ပန်းထဲ့ လိုက်တော့ သည်။
‘ ကျော်ကျော် .. နင် .. ပြန်တော့ … ’ ‘ ဟင် .. နင် ဘာနဲ့ ပြန်မှာလဲ .. ငါပြန်ပို့ပေးမယ်လေ .. ’ ‘ မလိုပါဘူးဟယ် .. လွတ်လွတ်လပ် လပ်ပဲ နေချင်တယ် .. . ’ ကျော်ကျော်သက်ပြင်း ချရင်း .. စောမြသူဇာ စိတ်ကို သိထားသူပီပီ .. စကားထပ်မပြော တော့ပဲ ကားကို မောင်းထွက်ခဲ့ လေသည်။ ‘ မြသဲစံအိမ် ’ ခန့်ညားထည်ဝါလှသော်လည်း ရေနံရောင်မှောင်မှောင်နှင့် ငြိမ်သက်နေခြင်းက ခြောက် ခြားတုံလှုပ်ဖွယ် ကောင်းနေသည်။ ကျော်ကျော့်ကို သူဇာက နိုင်လွန်းသည်။ တကယ်တော့ .. စောမြသူဇာ .. မြသဲစံအိမ်သို့ အပြီးအပိုင် ထွက်လာခဲ့ခြင်း သာ ဖြစ်သည်။ သည်အိမ်ကြီးမှာပင် နန်းဥမ္မာ နှင့် ချန်းဆိုထားခဲ့သည်။ နန်းဥမ္မာက .. သူဇာ့ အတွက် အတွင်းရေး တိုင်ပင်စရာ အကောင်းဆုံး သစ္စာအရှိဆုံး သူငယ်ချင်း ဖြစ်သည်။ မကြာမီ ချောကလက်ရောင် .. လင်ဆာကားလေး တစ်စီးခြံထဲသို့ လျောကနဲလှိမ့်ဝင်လာသည်။
ကားမောင်းသည်က နန်းဥမ္မာအကိုစောခွန်ပိုင်.. ခန့်ငြားပြီး .. ယောက်ျားပီသ သူမို့ .. သူဇာ ငေးနေမိပြီးမှ ..သတိဝင်လာကာ .. နန်းဥ မ္မာကို နှုတ်ဆက်သည်။ ‘ နောက်ကျလိုက်တာ .. ဥမ္မာရယ် .. ’ ‘ ကိုလေးပေါ့ .. ဈေးထဲ ဝင်နေသေးတယ်လေ .. ’ ‘ ခဏလေးပါ ဟာ .. နင်တို့ကလဲ .. ’ ခွန်ပိုင်က .. စီးကရက် တစ်ဘူးကို ထုတ်ယူလျက် ဆေးလိပ်တစ်လိပ်ကို မီးညှို့ဖွာရှိုက်ခါ ခြံထဲသို့ မျက်စေ့ ကစားလိုက်သည်။ ထိုအခါ အိမ်ကြီးနောက်ဘက်ရှိ ရေကန်စပ်တွင် ပုံ့ပုံ့လေးထိုင်ကာ ငါးမျှား နေသောနန်းအိဝါကို တွေ့လိုက်ရလေ သည်။ နန်အိဝါက.. ရေပြင်ကို .. ငေးနေသည်။ ငယ်ရွယ်နုပျိုမြစ်သော .. အိဝါ၏ တင်ပါးကြီးများက အရွယ်နှင့် မမျှအောင် ကြီးမား ဖွံ့ဖြိုးလား ခဲ့သည်မှာ ..ခွန်ပိုင် မကြာခဏ ခေါ်ပြီး ဖြုတ်နေခဲ့သည့် အချိန်မှ စခဲ့သည်။ နန်းဥမ္မာက .. ကားထဲမှ စားစရာ အချို့ကို လှမ်းယူပြီး .. စောမြသူဇာနှင့် အတူ ဧည့်ခန်းထဲ သို့ ဝင်သွားကြ၏။
မိမိညီမ နှင့် ရွယ်တူဖြစ်သော စောမြသူဇာသည် ခွန်ပိုင်ရင့်ကို လှုပ်ရှား စေသည်။ ထင်းရှူးပင်များ လေတိုးသံကိုသာ ကြားနေရ သော ခြံကျယ်ကြီးထဲ၌ ဤမြသဲစံအိမ် ကြီးမှာ .. တထီးတည်း အဖော်မဲ့စွာ .. ရပ်တည်နေသယောင် ။ နန်းအိဝါ.. ခွန်ပိုင်ကို လှမ်းမြင် သွားသည်။ လက်ထဲမှ ငါးမျှားတံကို ပစ်ချပြီး .. အပြေးကလေး လာလေသည်။ ခွန်ပိုင် တုန်လှုပ်သွားသည်။ ဒီဟာမလေးက တစ်ခါတစ်လေ ဇွတ်တရွတ် လုပ်တတ်သည်။ ‘ ဘာလာ လုပ်တာလဲ .. ကိုကို .. ’ ‘ နန်းဥမ္မာသူငယ်ချင်းကို ..လာပို့ကြတာပေါ့ .. ညကျရင် ကိုကိုလာမလို့ .. အိဝါ စောင့်နေနော် ခလေး .. ’ ‘ တစ်ကယ်.. မဟုတ်ပဲနဲ့ … ဟွန့် .. .. လာမယ်ဆိုပြီး မလာတာ ဘယ်လောက်ကြာပီလဲ .. သွားပါ .. ’
‘ အလုပ်တွေများနေလို့ပါ သဲလေးရယ် ဒီည ကိုကို ကိုးနာရီအရောက် လာခဲ့မယ် ဟို အခန်းကပဲ စောင့်နော်’ ‘ အမြဲ စောင့်နေသူပါ .. ကိုကို ရယ် .. ’ ‘ ကဲ.. နန်းဥမ္မာတို့ ရိပ်မိသွားဦးမယ် .. နော် .. သွားတော့ နော် .. ခလေး .. ’ ‘ အင်းပါ .. ကိုကို ရာ … .. မနှင်ပါနဲ့ . . ’ မျက်နှာလေးက ညှိုးငယ်ပြီး ထွက်သွားသော အိဝါနောက်ကျောလေးကို ကြည့်ရင်း ခွန်ပိုင် သက်ပြင်းလေး ချမိသည်။ ‘ ချာတိတ် .. လေးတွေ ချစ်ရတာ မလွယ်ပါလား .. ’ ဧည့်ခန်းထဲသို့ စောမြသူဇာနှင့် နန်းဥမ္မာတို့ ခေါင်းချင်း ဆိုင်နေသည်။ ‘ ကဲ .. အဲ့ဒီ့ .. ဒေါက်တာ … မင်းထိုက်က ဘယ်ကလဲ … ’ ‘ မေမေ . . သဘောတူတဲ့ လူပဲ .. အသက် (၃၀) လောက် ရှိတယ် .. သူ့ကို ဘယ်လိုမှ လက်မထပ်ချင်ဘူး ’ ‘ ခက်တာက … နင့်မှာလဲ .. ဘဲမရှိဘူး .. ’
‘ အိမ်ကိုတော့ ခုလောလောဆယ် ခဏရှောင်နေတာ .. အကောင်းဆုံးပဲ .. ’ ‘ အေးပေါ့ .. ခုတော့ .. ဒါပဲ .. ရှိတာပေါ့ .. ’ နှစ်ယောက် သား စကားအနည်းငယ်ပြောပြီး ပြန်ထွက်လာကြသည် ။ ခွန်ပိုင်က .. စက်နှိုးပြီး ကားကို အသင့် စောင့်နေသည်။ ‘ နန်းဥမ္မာတို့ .. အိမ်ပဲ .. မောင်းတော့ ကိုကို ’ မြသဲစံအိမ် အတွင်းမှ ကားလေး လှစ်ကနဲ ပြေးထွက်သွားသည်ကို အိဝါ တစ်ယောက် အုန်းပင် အကွယ်မှ ညှိုးငယ်စွာ ရင်မောကျန်ရစ်သည်ကိုကား မည်သူမျှ သတိမထားမိလိုက် ကြချေ ။ ညသည် ပိုမိုနက်ရှိုင်းလာနေသည်။ မှားသွားပလားဟု ကိုယ့်ဖာသာ ကိုယ်တွေးရင်း အိပ်မပျော် ဖြစ်နေမိလေသည်။ အိမ်သို့ ပြန်ပြီး ပစ္စည်း ပစ္စယများ ယူလျက် ဥမ္မာနှင့် တိုင်ပင်ပြီး မြသဲစံအိမ်ကြီး ကိုပင် ရွေးချယ်လျက် ပုန်းအောင်းရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ နန်းဥမ္မာက ရိက်ခာအစို အခြောက် များ.. ထမင်းချိုင့်ကို .. နေ့စဉ်လာပို့ပေးရသည်။
ကိုယ့်ဒုက်ခ .. ကိုယ်ရှာသည်ပဲ ပြောပြော .. လတ်တလောတော့ သူဇာ ပျော်ရွင်ှမိနေ သည်။ ဘာအချုပ်အချယ်မှ မရှိ .. ပကတိ လွတ်လပ်မှု့ အရသာကို အပြည့်အဝ ခံစားနေမိသည်။ ကုတင်လေးပေါ် သို့ လွတ်လပ်စွာ ဖြဲကား အိပ်နေပုံလေးမှာ ခလေးဆန်စွာ လှပလွန်းနေသည်။ ဖြူဖွေးသော ဆင်စွယ်နှစ်ရောင် အသားအရေလေးက ရေဆေးငါးကြီးသဖွယ် .. တစ်ကိုယ်လုံး လိုးချင်စရာ ကောင်းလှလေသည်။ ကြီးမားသော ဖင်အံကြီးက မွေ့ယာထက်၌ ဆောင့်လိုက်လျှင် .. အိကနဲ ကန်တက်လာမည့် အနေအထား မျိုးရှိသည်။ေ-ာက်ဖုတ်လေး က လုံးဝ သန့်စင်သော အရုပ်ကလေး တစ်ခုအလား .. အရောင် တစ်ဖိတ်ဖိတ် တောက်နေလေ သည်။ နန်းဥမ္မာ ညက ပြောသွားသော စကားကြောင့် စောမြသူဇာ အိပ်၍ မပျော်ဖြစ်နေရလေတော့ သည်။
‘ တစ္ဆေတွေ .. သရဲတွေဆိုတာ .. မရှိဘူးလဲ ပြောလို့ မရဘူး .. ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်အိမ်ပဲဥစ္စာ .. မကြောက်နဲ့ .. ’ မကြောက်နဲ့ ဆိုမှ စောမြ သူဇာ ကြောက် ချင်လာသည်။ ထင်းရူးပင်များ .. လေတိုးသံက တရူးရူး နှင့် ကြားနေရပြီး တစ်ခါတစ်ရံ ညဌက်ကလေးများ .. ဖြိုး ဖြိုးဖျောက်ဖျောက် အော်သံ လေးများ ကြားနေရသည်။ နေ့ခင်းက အပူရှိန်ကြောင့် အိမ်ကြီး၏ ပျဉ်ချပ်များ .. တကျီကျီ နှင့် မြည် နေသံလဲ သူဇာသိသည်။ မပိတ်ပဲထားသော ပြူတင်း တံခါးများ လေတိုးသဖြင့် ဒိုင်းကနဲ ဒိုင်းကနဲ စောင့်ပိတ်သွားသည့် အထိလဲ သူဇာ မလန့် .. ‘ အား .. အား .. နာတယ် .. ကိုကိုရယ် .. ဖြေးဖြေး .. ဖြေးဖြေး ပါ .. ကိုကိုရယ် .. လိုး ..အား …’ ‘ ဗြစ် .. ဗြစ် .. ပြွတ် .. ဘွတ် .. ဘွတ် .. ’ ဆိုသော အသံများကို သူဇာ .. အဖြေ မထုတ်တတ် .. မေမေ .. စောမြတ်သန္တာကို ဝဏ္ဏ နှင့် စောပြည့်တို့ ဝိုင်း – နေကြခြင်းလား။
အဲ့ .. ဒါကိုတော့ .. သူဇာ ကြောက်တယ် .. တော် ကြာ ကို့ရှေ့မှာ သရဲတွေ က မိမိကိုပါ – လာလျင် မခက်လား .. ‘ ကောင်းလိုက် တာ.. ကိုကိုရယ် .. ကျွတ် .. ကျွတ် .. တအား ဆောင့်ပါ ကိုကိုရယ် .. ဆောင့် ဆောင့် ပါ ..’ မိန်းကလေး အသံက သနားစဖွယ် ကောင်းနေသည်။ အသံက တိုးလွန်းသော်လည်း တိတ်ဆိတ်သော ညယံကို ထွင်းဖောက်၍ အပေါ်ထပ်ညာဘက် အခန်းဆီက လိုလို .. အခန်းလွတ်များစွာကလည်း ရှိနေရက် စောမြတ်သူဇာ ဇဝေဇဝါဖြင့် နားကို စွင့်နေမိသည်။
‘ ကြီးကလဲ .. အကြီးကြီးပဲနော် .. အဟင်းဟင်း .. ’ ‘ ဦးမလို့လားဟင် .. တော်တော့ ကွာ .. .. ’ ‘ ကိုကိုကလဲ .. ပုံစံ အမျိုးမျိုးနဲ့ လဲ ပြီးပြီ .. ခုထိ သူမကျေနပ်သေးဘူး .. ကြည့် ပါလား .. အဟင့် .. ’ အသံများကို သူက .. နားစွင့် နေသည်မှတပါး အခြားလှုပ်ရှားမှု့ တစ်စုံတစ်ရာ မပြုဝံ့ ။ သဘာဝ အတိုင်း တစ်အိမ်လုံး၌ တစ်ယောက်ဆိုသော အသိက သူဇာ့ကို လွမှ်းမိုးထားသည် .. အလိုလို နေ ရင်း ကြောက်နေပြီး .. ည(၁၂) နာရီ ပတ်ဝန်းကျင်မှ အသံများ ရပ်ဆိုင်း သွားလေ သည် .. ပြီးမှ စောမြသူဇာသည်လည်း အိပ်ပျော် နိုင်ခဲ့လေသည်။
‘ ကျွီ .. ဝုံး .. .. အမလေး .. ’ ရုတ်တရက် .. အခန်းတံခါး ထောင့်ပွင့်သွားခြင်း နံရံနှင့် ဆောင့်မိသဖြင့် သူဇာ လန့်သွားလေ သည်။ လေပြင်း တစ်ချက် ဆောင့်တိုက်လိုက် ခြင်းဖြစ်သဖြင့် စောမြသူဇာ ခြောက်ခြားနေရာမှ သက်ပြင်းချနိုင် သည်။ ည .. ဆိုသော .. ဆောင်း၏ လွှာရုံသည် . ပိန်းပိတ်အောင် မှောင်နေပြီး နှင်းမှုံတွေလည်း ဝေ့ဝဲကျ နေခြင်းကို အထီးကျန်ဆန်နေသလိုလို ခံစားရ သည်။
အချိန်သည် ယမန်နေ့ကကဲ့သို့ပင် တရွေ့ရွေ့ နက်ရှိုင်း ပိန်းပိတ်သော အလွှာခြုံစောင်ကြီးကို ကမ္ဘာလောကကြီးအား လွမှ်းခြုံထား လေသည်။ စောမြသူဇာလည်း အပေါ်ထပ်လှေခါးမှ ဆင်းလာသည်။ ညဝတ်အင်္ကျီဖါးဖါးကြီးကို အခုအခံမပါ ဝတ်ထားသဖြင့်ပန်းပု ရုပ် ကလေးပမာ လှပကျော့ရှင်းနေသည်။ လှေခါးအတိုင်းဆင်း လာပြီး ဧည့်ခန်းဆီသို့ လှမ်းမည်အပြု၌ ‘ စောမြသူဇာ .. ’ ဟု .. ခပ် အုပ်အုပ် ခေါ်သံကို ကြားလိုက်ရလေသည်။
အနီးရှိ နံရံတွင် ကျောကပ် မှီရပ်ရင်း နားစွင့် နေလိုက်လေသည်။ ‘ စောမြသူဇာ ကိုယ်ပါ .. ခွန်ပိုင်ပါ .. ဒီမှာ .. ’ ခွန်ပိုင်မှန်း သိမှ စောမြသူဇာ အားတက်ဝမ်းသာသွားသည်။ ဧည့်ခန်းဆီသို့ ပြေးဆင်းလာခဲ့လေသည်။ ‘ အကို .. .. အကို ခွန်ပိုင်လား .. ဟင် ’ ‘ အေး .. အကို ခွန်ပိုင် ပါ .. ဒီမှာ .. လာလာ .. သူဇာတစ်ယောက်ထဲ ဘယ်လိုနေမလဲလို့ ဥမ္မာက ကြည့်ခိုင်းလိုက်လို့ လာကြည့်ရတာ ။ ’
‘ အဟင်း .. ဘယ်လိုနေမလဲ .. ဟုတ်လား .. ကြောက်နေတာပေါ့ .. တစ်ယောက် ထဲဟာကို .. ’ အပြင်မှ .. အလင်းရောင် ဖျော့ ဖျော့တွင် သူဇာသည် မိမိကိုယ်ကို မသုံးသပ်မိပဲ ခွန်ပိုင်နားသို့ တိုးကပ်သွားမိသည်။ ခွန်ပိုင်ကိုယ်မှ မွှေးကြိုင်သင်းပျံ့သော ရေမွှေးနံ့ က ကြိုင်လှိုင်စွာ ထွက်နေသည်။ ညဝတ်ဇာ ဖြူပါးပါးကြီးက .. သူဇာခန်ဓာကိုယ် ဝတ်လစ်စလစ်ကလေးကို လုံခြုံမှု့ မပေးနိုင် ဖြစ် နေသည်။
အဖုအထစ် အလုံးအကျစ်များက ခွန်ပိုင့်ကာမစိတ်ကို တရိပ်ရိပ် တရှိန်ရှိန်ဖြင့်မြင့်မား လာနေစေတော့သည်။ ခွန်ပိုင့်မျက်လုံးများက တလက်လက် တောက်ပလာနေလေသည်။ အမှတ်မထင် စောမြသူဇာ ပုခုံးလေး နှစ်ဖက်ကို သိမ်းယူပွေ့ငင်လိုက်ရာ .. စောမြ သူဇာ၏ ကိုယ်ခန်ဓာလေးမှာ ခွန့်ပိုင် ရင်ခွင်ထဲ၌ နွေးထွေး အိစက်စွာ ပုံလျက်သားလေး ရောက်ရှိသွား လေသည်။
‘ သူဇာ .. ကြောက်တယ် .. အကို .. ကြောက်တယ် .. ’ သူဇာက ကြောက်တယ် ဆိုသော စကားကို အထပ်ထပ် ရွတ်ဆိုရင်း ခွန်ပိုင့် ရင်ခွင်ထဲသို့ မျက်နှာကို တိုးဝင် လာသည်။ အသက်ရှူသံများက မုန်တိုင်းထန်လာသည်။ နှစ်ဦးသား၏ သွေးသားဆူပွတ်မှု့တို့ကရင်ခုံ သံများ အဖြစ်သို့ အသွင်ပြောင်းကာ .. တဒိတ်ဒိတ် နှင့် နှစ်ဦး သား ရင်ချင်းအပ်ကာ ကြားနေကြရသည်။
‘ ချစ်တယ် .. သူဇာရယ် .. ’ ‘ ဟင့် .. .. အင် .. ’ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုရခက်သော စကားတစ်လုံးကို သူဇာက ရှက်ပြုံးလေးဖြင့် ရွတ်ဆို ရင်း .. ခွန်ပိုင့် ရင်ဘတ်ကြီးကို ရှက်ရှက်နှင့်ပွတ်သပ်နေ၏။ ခွန်ပိုင့် လက်များက.. နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ပယ်ပယ် နယ်နယ်ကြီး အုပ်ကိုင် ပြီး .. တရွရွ ပွတ်သပ် စပြုလိုက်လေရာ .. ‘ အို့ .. အကို .. ရယ် .. ’ ခွန်ပိုင် လက်များကို အသာအယာ အုပ်ကိုင်ရင်း သူဇာ ငြီး တွားသည်။ တဖြေးဖြေးရင်ခုံသံများက အသားတဆတ်ဆတ် တုံရီ ခြင်းများက အရိုင်းမလေး သူဇာ တစ်ကိုယ်လုံးကို လွမ်းခြုံ အုပ်စိုး လာလေသည်။ နှုတ်မှ .. တဟင်းဟင်း .. အဖျား တက်သလိုလဲ ငြီးနေသည်။
‘ အင်္ကျီကြီး .. .. ချွတ်လိုက် မယ်နော် .. သူဇာ .. . ’ ‘ အို .. အကို .. ’ သူဇာ့ စကားမဆုံးမီ .. ညဝတ်အင်္ကျီကြီးက ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ ပုံ ကျသွားလေသည်။ ခွန်ပိုင့် ရင်များ .. ပူလောင် နွေးထွေး လာသည်။ လည်ချောင်းဝ၌ တစ်ဆို့သော ဝေဒနာ တစ်ခုကိုလည်း ခံစားလာ ရ ပြီး တံတွေးကို .. ဂလုကနဲ့ မြိုချလိုက်ရလေသည်။ သူဇာ့ ရင်၌မူ .. အ – ခံရတော့ မည် ဟူသော အသိကြောင့်လားမသိ ရင်ခုံ ခြင်း ဝေဒနာထက် အလွန်အမင်း တဆတ်ဆတ် တုံနေသော .. လက်ဖျားခြေဖျား များ နှုတ်ခမ်းပါးလေး များကို .. ကြိုးစား ထိန်းသိမ်းနေရလေသည်။ ‘ အို .. အကို .. ’ တကယ်ပါ .. သူဇာ ဘယ်ယောကျာ်းလေး တစ်ယောက်ရဲ့ အထိအတွေ့ကိုမှ မခံစားဘူး ကာ ခုလို မဲ့ အဆင့်အထိ .. အကို ခွန်ပိုင် ပြင်ဆင်နေတာကြီးက သူဇာအဖို့ တုန်လှုပ်ခြောက် ခြားစေတာ အမှန်ပဲ ဖြစ်သည်။
သူဇာရဲ့နို့ကြီး နှစ်လုံးကလဲ ဆွဲဆောင်မှု့ အပြည့်ရှိနေသည်ကလည်း အမှန်ဖြစ်သည်။ ဖြူဝင်းသန့်စင်နေတဲ့ နို့အုံကြီးတွေကို .. အကို ခွန်ပိုင်.. ဆုပ်ကိုင် နယ်ဖတ်နေတော့ သည်။ သူဇာ့ေ-ာက်ဖုတ်လေး .. .. ရွစိ ရွစိ ဖြစ်လာတာ အမှန်ပဲလို့ မရှက်တမ်းဝန်ခံလိုက်ချင် သည်။ အကိုကနို့ကြီးတွေကိုဆုပ်ကိုင်နေပြန်တော့ သူဇာ့မျက်နှာလေးကို မော့ပြီး ပါးစပ်လေးဟပြီး တအင်းအင်း နှင့် ငြီး နေမိသည်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် . . အကို့ .. အယုအယ .. အကိုင် အတွယ် တွေက အခံချင်လာအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ကာ .. သူဇာ ကိုယ်တွေ့ခံစား လာ ရသည် ..
‘ ဟော .. အို့ .. ကြည့်ပါဦး ..’ သူဇာ့ေ-ာက်ဖုတ် လေးထဲကို လက်ကြီးနဲ့ နှိုက်ပြီး မွှေ နေပြန်ပါပြီ .. ခက်လိုက်တာ .. မရွှံမရှာ .. ဟင် ..ေ-ာက်စိလေးကိုလည်း ပွတ်နေပြန်ပြီကွယ် .. အို . သူဇာ တစ်ကိုယ်လုံး မြောက်တက်ပြီး လေမှာ လွင့် နေရသလိုလို ..ခြေဖျားလေးတွေက ထောက်ကားပြီး ပေါင်လေးနှစ်ဖက် ကိုကားပေး နေမိပြန်ပါသည်။ ခွန်ပိုင်ရဲ့ လက်များအလုပ်ရှုပ်နေ သလောက် သူဇာ့ ခမျာ အလူးအလဲ ခံစားနေရရှာပါသည်။ေ-ာက်ပတ်လေးထဲမှ .. အရေကြည်လေးများက တသွင်သွင် ကျဆင်း လာပြီး .. မျက်လုံးလေး မှေးစင်းပြီး တအင့်အင့်နှင့် ညီးနေတဲ့ သူဇာ့ ကိုယ်လုံးလေးကို .. အနီးမှာ ရှိတဲ့ စားပွဲတစ်လုံးပေါ်သို့ ထိုင် ခိုင်းလိုက်သည်။ ပြီး .. ခြေနှစ်ချောင်းကို စားပွဲပေါ်သို့ တင်ပြီး ဆောင့်ကြောင့်လေး ထိုင်ခိုင်းလိုက်ရာ ..
သူဇာေ-ာက်ဖုတ်လေးမှာ ပြဲအာကာ နီနီရဲရဲလေး .. ပွင့် အာနေလေတော့သည်။ အကိုက ဒီတော့မှ သူ့ ကြီးကို ပွဲထုတ်လိုက်သည်။ မြွေဟောက်အနက်မျိုး တောက်ပြောင် နေသည်။ မမြင်ဖူးသော သူဇာ က မမှိတ်မသုန်ကြည့်ရင်း ကြောက်သလိုလို ရွံ့သလိုဖြစ် နေသည်။ ဒါကြီးက မိမိေ-ာက်ဖုတ်ထဲ .. အဆုံးအထိ ဝင်မှာပါလားဆိုသော အသိက ရင်ကို အပြင်း အထန် ခုံစေသည်။ စားပွဲ စွန်း၌ ဆောင့်ကြောင့်လေး လက်နောက်ပြစ် ဖင်လေးကို စားပွဲကြမ်းပြင်နှင့် ထိထိုင်ထား သော သူဇာ့ ဒူးခေါင်းနှစ်လုံးက တ ဆတ်ဆတ် နှင့် တုံနေလေသည်။ ကြီးက မိမိေ-ာက်ဖုတ်ကလေး၌ တေ့လိုက်ရာ ..ေ-ာက်ပတ်နှင့် ပထမဆုံး အကြိမ် အထိခံရ ခြင်းဖြစ်၍ စအိုလေး ရှုံ့သွားပြီး ဖင်လေးကို တွန့်သွားမိသည်။
အကို့လက်ကြီး နှစ်ဖက်က ခါးလေးကို ဆွဲကိုင်ပြီး . ဒူးနှစ်လုံးကိုပါ လိမ်ပိုက်လျက် ကြီး ကိုဖိသွင်းလိုးချလိုက် လေသည်။ ‘ ပြစ် .. ဗ ရစ် .. ပြွတ် ..’ ‘ အင့် .. အင့် .. ဟင်း .. ’ နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကို တင်းတင်းစု .. မျက်စေ့လေးမှိတ်ပြီး ခေါင်းလေးကတဖက်သို့စောင်း ကာ သူဇာ ငြီးငြူလိုက်ရှာလေသည်။ တပြည့်တခဲ တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီး ဝင်လာသော – ကြီးကြောင့်ေ-ာက်ခေါင်း လေးထဲ၌ လေကြောင်း အန္တရယ်အချက်ပြ ဥသြသံ ကြားရသော လူများကဲ့ သို့ ရုတ်တရက် .. ဗြောင်းဆန်ပြီး .. လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ကြီး ဖြစ်ကုန် သည်။ ဝရုန်းသုန်းကား .. လှုပ်ရှားနေကြသောေ-ာက်ခေါင်း အတွင်းသားများကို ကြီးက ပွတ်တိုက်ပြီး သားအိမ်ဆီသို့ ဒလ ကြမ်းဝင် သွားလေရာ သူဇာ့ ခမျာ ဖိန့်ဖိန့် တုံအောင်ပြီး .. သွက်သွက်ခါ သွားရလေသည်။
ခွန်ပိုင်ကလည်း .. အသစ်စက်စက်ေ-ာ က်ဖုတ်လေး ကို အပိုင်အနိုင် ခွင့် ရပြီမို့ အားရပါးရ ကြီး ဆောင့်နေလေတော့သည်။ ‘ နာ .. လိုက်တာ .. အကိုရယ် .. အထဲက ကျင် တယ် .. ’ ခွန်ပိုင်က .. အနည်းငယ် လျော့ပြီး ..ဆောင့်ကာ .. ခြေတစ်ချောင်း ကို ပုခုံးပေါ်သို့ ထမ်းယူ ပြီး ပိုမိုပြဲကားလာ သောေ-ာ က်ဖုတ်လေးထဲသို့ လက်နက်ကြီးများ ပြစ်သွင်းနေသကဲ့သို့ တစ်လုံးပြီး တစ်လုံး ပိုင်ပိုင်ကြီး ဆောင့်ချလိုက်ရာ ..
‘ အင့် .. .. . အင့် .. .. . အား .. .. . အား .. . . ဘာတွေ ထွက်ကုန် ပီလဲ မသိဘူး ..’ သူဇာ က ခလေးလေး လို ငြီးဆောင့်သွားပြီး ခွန်ပိုင့် လက်မောင်းကြီးကို လှမ်းဆွဲထား လိုက် လေသည်။ ခွန်ပိုင်ကလည်း .. သူဇာ ပြီးသွားမှန်း သိလိုက်သည်။ ခြေနှစ်ချောင်းကို မိမိခါးတွင် ကပ်ကျေးကိုက် ဆွဲယူပြီး သူဇာ့ အပေါ်သို့ မှောက်ချလိုက်ပြီး ဖင်ကြီးကို အားရှိပါးရှိကြီး မြှောက်ကာ ဆောင့်လိုက်ပြီး .. သူဇာ့ေ-ာက်ခေါင်းလေး ထဲသို့ သုတ်ရေများ ကို ခပ်ပြင်းပြင်းလေး ပန်းထုတ်လိုက်လေ သည်။
သုတ်ရေများကေ-ာက်ပတ်အကွဲကြောင်းလေး မှ ယိုစိမ့် စီးဆင်း လာလေတော့သည်။ ‘ ဝှီး .. . .. .. ဒုတ် .. .. . ငါလိုးမသား .. လူပါးဝလိုက်တာ … .’ ဓါးမြောင်က နံရံသို့ ပစ်ပေါက်လိုက်ပြီး ပြင်းထန်စွာဆဲဆို ကြိမ်းမောင်း နေသူကား .. ကျော်ကျော် ဖြစ်သည်။ ဦးစပ်ခွန်ကြာက သမီး ဖြစ်သူ .. အိမ်မှ ရုတ်တရက် ပျောက်ဆုံးသွား၍ နောက်ဆုံးအတူရှိခဲ့ သော ကျော်ကျော့်ကို ခေါ်ယူ စုံစမ်းရင်းမှ စ၍ .. ညက ကျော်ကျော် တစ်ယောက် မမျှော်လင့်ပဲ မြသဲစံအိမ်သို့ ရောက်ခဲ့ သည်။ စီးလာသော ဟွန်ဒါ ဆိုင်ကယ် လေးကို .. ခြံ၏ ထင်းရူးပင်၌ ထားခဲ့ပြီး အိမ်ရှေ့သို့ အရောက် ဧည့်ခန်းမှ မြင်ကွင်း .. ကျော်ကျော့်ရင်ဝကို .. လောင်ချာနှင့် တေ့ ပစ်လိုက် သလိုမျိုး ခံလိုက် ရလေသည်။
ကြည့်ပါဦး .. ဧည့်ခန်းထောင့် စားပွဲလေး ပေါ်၌ စောမြသူဇာကို .. ဆောင့်ကြောင့်လေး ထိုင်ခိုင်းပြီး အားရပါးရကြီး ဖြုတ်နေသော ခွန်ပိုင်ကို တွေ့ရသည်။ စောမြသူဇာသည် ကျော်ကျော့် အသဲ .. အသက် .. မနမ်းရက် . မချူရက် သော .. ပန်းလေး ကိုမှ .. ခွန်ပိုင်က . ပယ်ပယ် နယ်နယ်ကြီး .. ခြေမွ ဖျက်ဆီးခဲ့ လေသည်။ သည်ကတည်းက ကျော်ကျော် .. ဘောင်းဘီအိတ်ထဲက မောင်းပြန်ဓါးကို ကိုင်မိလိုက်လေသည်။ သို့သော် .. စောမြသူဇာ .. ကိုယ်တိုင်ကိုက ခွန်ပိုင့်အား ပေါင်လေး ဖြဲဖြဲပြီး ကော့ကာ ကော့ကာ အခံ နေပုံက .. အလိုတူ အလိုပါ ပုံစံ ဖြစ်နေလေတော့ သည်။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ဟျောနနျးဒဝေီ